မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စွဲခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်း (2019) - Brain On Porn
Neurobiol စိတ်ဖိစီးမှု။ 2019 ဖေဖော်ဝါရီ; 10: 100148 ။
2019 ဖေဖော်ဝါရီ 1 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.ynstr.2019.100148
Stephanie အီး Wemm* နှင့် Rajita Sinha
လေ့လာမှုတစ်ခုအရေအတွက်ကို psychoactive စိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါး, စိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒအပေါ်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေရရှိလာတဲ့အတွက် neuroadaptations နှင့်စွဲလမ်းအန္တရာယ်နှင့် relapse အပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ပါပြီ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအဓိကအားဖြင့် hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုးနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် (ပေးစေလိုပါတယ်) တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အလွဲသုံးစားမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, နီကိုတင်း, ဆေးခြောက်, psychostimulants, အရက်နှင့် opioids) ၏ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသက်ရောက်မှုအပေါ်လူ့သုတေသနဖုံးလွှမ်း။ ကျနော်တို့ရင်တော့မှားမယ်သို့မဟုတ်အလင်းအပန်းဖြေအသုံးပြုသူများနှင့်မူးရူး / မိုးသည်းထန်စွာသို့မဟုတ်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအတွက်စူးရှသောအရံစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်း phasic စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်ယခင်နှင့်ဆက်စပ်နေသောအပြောင်းအလဲများမှအဆုံးစွန်သောဆွေမျိုးအတွက်လုပ်သူများအဆင့်ဆင့်မြားတှငျပွောငျးလဲ၏သက်သေအထောက်အထားများ, ဒါမှမဟုတ်သည်းခံစိတ်ဆွေးနွေးပါ။ ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်ပါက drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related cue တုံ့ပြန်မှုနှင့်တဏှာမှသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများသည်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု system ကိုသည်းခံစိတ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆွေးနွေးပါ။ တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့် relapse အန္တရာယ်၏စည်းမျဉ်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက် striatal နှင့် prefrontal cortical အပေါ် glucocorticoid တုံ့ပြန်မှုနှင့်၎င်းတို့၏အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်များ၏သက်ရောက်မှုများပေးအပ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့နောက်ထပ်စိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒအပေါ်ဒီဆေးတွေရဲ့သက်ရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါဤကဲ့သို့သောလိင်, Co-ဖြစ်ပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအဖြစ်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်အချက်များ, နည်းစနစ်အတွက်အစောပိုင်းစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ဒုက္ခနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသမိုင်းနှင့်အပြောင်းအလဲအပါအဝင်အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစား, summarize ။
keywords: စိတ်ဖိစီးမှု, စွဲလမ်း, မူးယစ်ဆေး, cortisol, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန် (ကျင်းပေါင်း) ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသိသာထင်ရှားစွာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးခံရ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်နိုင်ငံတည်းအတွက်, ကျင်းပေါင်းရာဇဝတ်မှု, ဆင်းရဲသောကျန်းမာရေးရလဒ်များနှင့်ရှုံးနိမ့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား (အပါအဝင် domains များအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီး $ 400 ဘီလီယံကုန်ကျရန်ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ကနျြးမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများ, 2016 အမေရိကန်ဦးစီးဌာန) ။ အရက်-related အသည်းရောဂါအတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ် (လူငယ်များ ပို. ပို. အသုံးပြုမှုကနေပိုပြီးအကျိုးဆက်များကိုတွေ့ကြုံနေကြရှိရာလက်တွေ့တင်ဆက်မှုအတွက်ဆိုင်းရှိပါတယ်ပိုများပြီTapper နှင့် Parikh, 2018), opioid အသုံးပြုမှုရောဂါ (Martins et al ။ , 2017), နှင့်ဆေးခြောက်-related မော်တော်ယာဉ်ပျက်ကျ (Brady နဲ့ Li, 2014) ။ ဤရွေ့ကားခေတ်ရေစီးကြောင်းစုပေါင်းနာတာရှည်, ပြဿနာပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှရံဖန်ရံခါသုံးစွဲခြင်းကနေအကူးအပြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါတိကျတဲ့ယန္တရားများပစ်မှတ်ထား၏အရေးပါမှုကိုထောက်ပြ။
ကလေးကမတရားသဖွငျ့အပါအဝင်ငယ်ဘဝစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာဒုက္ခ, သော့ကိုစွဲလမ်းမမှန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကနေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရန်, စွဲလမ်း၏သံသရာတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအချက်များ, relapse နှင့်ကျင်းပေါင်းကနေပြန်လည်နာလန်ထူ (များမှာဧနောက်, 2011; သည် Le Moal နှင့် Koob, 2007; Sinha, 2008, 2001) ။ လူတန်းစားစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသူ့ဟာသူ၏အစွမ်းထက်သက်ရောက်မှုအပေါ်ကန့်သတ်အာရုံရှိခဲ့သည်။ အတော်ကြာလေ့လာမှုများကဤစနစ်များအတွက်ပြောင်းလဲ setpoint မှထောက်ပြခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလျော့နည်း cue reactivity ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆျောမှုနှင့် relapse အန္တရာယ်ပေါ်ဤအကြောင်းအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့ထူးထူးခြားခြားဇီဝစိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု, ဆုလာဘ်, တဏှာနှင့် relapse အန္တရာယ်အပေါ်သူတို့ရဲ့ဆက်စပ်ဆိုးကျိုးများအပေါ်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ယခင်အလုပ် (စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်အသုံးပြုမှုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်အလွဲသုံးစားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်Armario, 2010) နှင့်စွဲသင်တန်းအပေါ် Translational သုတေသန (Lijffijt et al ။ , 2014) ။ မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆျောမှုနှင့်စားသုံးမှုအပေါ်ပြောင်းလဲရံစိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒ၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်းဆွေးနွေးသောအခါထိုသို့ကျနော်တို့လူ့လေ့လာမှုများနှင့်အရံစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အဓိကအားအာရုံစိုက်နှင့်ဗဟိုဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုလမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်။ ထို့ပြင်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြသည်နီကိုတင်း, အရက်, ဆေးခြောက်, psychostimulants (ဆိုလိုသည်မှာ, ကိုကင်းနှင့်အမ်ဖီတမင်း) ၏မူးယစ်ဆေးနှင့် opioids ဖုံးလွှမ်း။
1.1 ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအရံနှင့်ဗဟို neuroadaptations အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး
ကျင်းပေါင်းစပ်လျဉ်းအများဆုံးမကြာခဏလေ့လာခဲ့ဇီဝစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဟာရံကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် (ပေးစေလိုပါတယ်), ပုစာနာခြင်းနှင့် parasympathetic လက်နက်၏အထူးဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal ၏ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု (HPA) ၏နှစ်ခုအကိုင်းအခက်များပါဝင်သည် ဝင်ရိုး (ကိုတွေ့မြင် Milivojevic နှင့် Sinha, 2018 ) စိတ်ဖိစီးမှု biomarkers ၏သုံးသပ်ချက်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို, ကြှနျုပျတို့တိကျတဲ့ပေးစေလိုပါတယ်၏အစီအမံ (ဆိုလိုသည်မှာ, epinephrine / norepinephrine, နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ [HRV]) နှင့် HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ adrenocorticotropic ဟော်မုန်း [ACTH] cortisol / corticosterone အာရုံစိုက်တော်မူမည်ကိုတွေ့မြင် သဖန်းသီး။ 1 ) သရုပ်ဖော်ပုံပါ။ လူသားများတွင်အလယ်ပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်း (ယခင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထဲမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါပြီLovallo, 2006; Sinha, 2008) နှင့်ဦးနှောက်ကို stem အကြားအပြန်အလှန် (Locus Coeruleus [LC] ပါဝင်သည်; Ventral Tegmental ဧရိယာ [VTA]; Substantia Nigra [SN]; Dorsal Raphe), limbic (hypothalamus, amygdala, thalamus, နှင့် Stria Terminali ၏အိပ်ရာနျူကလိယ [BNST] ), striatal (ventral နှင့် dorsal) နှင့် prefrontal cortex (PFC) ၏နောက်ကျနေခဲ့သည်, anterior cingulate နှင့်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်, အာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာ cortical, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ဖိစီးလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ဤတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုဆားကစ် (ကြည့်ရှု သဖန်းသီး။ 1) ။ ဤရွေ့ကားအလယ်ပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်းအများဆုံးစူးရှသောမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအတွက် neuroimaging tools များအားဖြင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ, မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆျောမှုနှင့် relapse များအတွက်အန္တရာယ်အမှတ်အသားများအဖြစ် (စတိန်းနှင့် Volkow, 2002; Longo et al ။ , 2016; Sinha, 2013, 2008; Sinha နဲ့ Li, 2007).
အရံစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဗဟိုစိတ်ဖိစီးမှု circuitry အကြားပြောင်းလဲနေသောဆက်စပ်မှုတွေ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့် HPA ဝင်ရိုး arousal (1) စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတုံ့ပြန်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည် arousal တစ် limbic ဆားကစ်သို့ရံတုံ့ပြန်ချက် (2) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆုလာဘ်ပြည်နယ်များ (3) ကိုထိန်းညှိဖို့သပ္ပါယ်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုစတင်ရန်အလယ်ပိုင်း activation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အာရုံခံဒေသများအလယ်ပိုင်းစိတ်ခံစားမှု, သိမြင်မှု, အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုမှလိုက်လျောညီထွေနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သော amygdala, hippocampus နှင့် locus coerulus (LC), မှသတင်းအချက်အလက်များသည်။ Amy = Amygdala, HP က = Hippocampus, HYP = Hypothalamus, PFC = Prefrontal Cortex, THAL = Thalamus, VTA = Ventral Tegmental ဧရိယာ။ Templates ကို Servier ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအနုပညာ (ထံမှအသုံးပြုခဲ့ကြသည်www.smart.servier.com).
2 ။ acute နှင့်အရံစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်နာတာရှည် psychoactive မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ
2.1 ။ နီကိုတင်း
2.1.1 ။ မဟုတ်သောနဲ့အလင်းဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်နီကိုတင်း၏ acute ဆိုးကျိုးများ
Non-ဆေးလိပ်သောက်သို့မဟုတ်အလင်းဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် HPA ဝင်ရိုး ( "chippers") ရက်နေ့တွင်နီကိုတင်း၏စူးရှသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနာတာရှည်အသုံးပြုသူများနှိုင်းယှဉ်ပါက, အထူးသဖြင့်လူ့နမူနာအတွင်း, အပြင်-မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, Non-မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, နီကိုတင်း (အထူးသဖြင့်နီကိုတင်းထိုးမြင့်မားမှာပါ corticosterone အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးAcri, 1994; ချန် et al ။ , 2008; Donnie et al ။ , 2000; Lutfy et al ။ , 2012; Okada et al ။ , 2003) ။ နှစ်ဦးစလုံးနီကိုတင်း-ရင်တော့မှားမယ်ပုံမှန်နီကိုတင်းသည်အသုံးပြုသူများကိုတွေ့မြင် (cortisol, ACTH နှင့် prolactin အတွက်ထိုး-မှီခိုတိုးအစီရင်ခံခဲ့ကြပြသ Mello, 2010 ) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ယန္တရား၏လေ့လာရေး (ထို HPA ဝင်ရိုးပေါ်နီကိုတင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအဓိက hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် norepinephrine နှင့် CRH များ၏နီကိုတင်း-သွေးဆောင်လွှတ်ပေးရန်မှတစ်ဆင့်ကြောင်းအကြံပြုဖူ et al ။ , 1997; Matta et al ။ , 1990; Okada et al ။ , 2003) ။ ဤရွေ့ကားစုပေါင်းတွေ့ရှိချက်နီကိုတင်းဟာပေးစေလိုပါတယ်၏ catecholaminergic နှင့် cholinergic ဆွအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုမှတဆင့် HPA ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ဖော်ပြသည်။
အဆိုပါပေးစေလိုပါတယ်နှင့်စပ်လျဉ်းရင်တော့မှားမယ်သို့မဟုတ်အလင်းဆေးလိပ်သောက် '' catecholamines တုံ့ပြန်မှုများအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်တော်တော်များများလူ့လေ့လာမှုများကွေအတွက်နီကိုတင်း၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ Epinephrine ယုံကြည်စိတ်ချရသော (နီကိုတင်းမှတုန့်ပြန်နေတဲ့ထိုး-မှီခိုဖက်ရှင်အတွက်ကိုတိုးမြှင့်ရန်ပြသထားသည်Grunberg et al ။ , 1988; Mello, 2010; Morse က, 1989; watts, 1960), အထူးသဖြင့်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအခြေအနေများအောက်တွင် (Donnie et al ။ , 2000) ။ နီကိုတင်းလည်း (တိရိစ္ဆာန်များအတွက်နှလုံးသွေးကြော output ကိုတိုးပွားစေwatts, 1960), Non-ဆေးလိပ်သောက်လူသားတွေအတွက်ပုံတူကူးယူထားသည်တဲ့တွေ့ရှိချက် (Foulds et al ။ , 1997; Perkins et al ။ , 2009) ။ နီကိုတင်းမှတုန့်ပြန်သောအခါနှစ်ဦးစလုံး, HRV လူ့မော်ဒယ်များမှာတော့တော်တော်များများလေ့လာမှုများအနိမ့်အကြိမ်ရေအတွက်တိုး (LF;; စာနာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအညွှန်းကိန်း) ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်နီကိုတင်းတိုးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြကြနှင့်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းအတွက်လျော့နည်း (parasympathetic လှုပ်ရှားမှု HF) တစ်ဦးဖိအားနှင့်အတူပူးတွဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရ (Karakaya et al ။ , 2007; Sjoberg နှင့်စိန့်, 2011).
2.1.2 ။ နာတာရှည်, မိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်နီကိုတင်း၏ acute ဆိုးကျိုးများ
နာတာရှည်နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် HPA ဝင်ရိုး၏လုပ်သူများအဆင့်ဆင့် dysregulates ။ နာတာရှည်ဆေးလိပ်သောက်သူများ (Non-ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ဆွေမျိုး သာ. ကြီးမြတ် Basal cortisol ပမာဏပြသal'Absi, 2006) ။ နာတာရှည်အသုံးပြုသူများအခုနှစ်မှာစူးရှသောနီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေးနောက်ထပ် (cortisol နှင့် ACTH အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးချန် et al ။ , 2008; Mendelson et al ။ , 2008; Pomerleau နှင့် Pomerleau, 1990; Seyler et al ။ , 1984; Wilkins တို့ et al ။ , 1982) အထိုး-မှီခိုထုံးစံ၌ (ဟေးလ်နှင့် Wynder, 1974; Mendelson et al ။ , 2005) ။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနီကိုတင်းအစောပိုင်းအသုံးပြုမှုအတွက် corticosterone နှင့် ACTH elevates ပေမယ့်, နီကိုတင်းနေဆဲတစ်ဦးမြင့်တက်သွေးဆောင်သော်လည်း, နီကိုတင်းရန်ဤတုံ့ပြန်မှု (အဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက် attenuated ခဲ့ကွောငျးကိုပြသချန် et al ။ , 2008); နာတာရှည်အသုံးပြုသူများအ chippers (နှိုင်းယှဉ်တဲ့လူသားတစ်ဦးဆက်စပ်လေ့လာမှုမှာပုံတူကူးယူထားသည်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်Shiffman et al ။ , 1992) ။ နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ (စူးရှ abstinence ၏ကွဲပြားအရှည်မှာပိုမိုမြင့်မား Basal HPA ဝင်ရိုးသံနှင့်နီကိုတင်းဖို့တုံးတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Cohen ကို et al ။ , 2004; ဖရက်ဒရစ် et al ။ , 1998) ။ ထို့ကြောင့် HPA ဝင်ရိုး (ကိုတွေ့မြင်နာတာရှည်ဆေးလိပ်သောက်၏လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုမှ adapts al'Absi, 2006 ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့်စောစော abstinence စဉ်အတွင်းဤအပြောင်းအလဲများကိုဆုတ်ခွာပိုဆိုးလာရင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးလာမှု။
မိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်လည်းပေးစေလိုပါတယ်သည့်စနစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပြတ်တောက်ဖော်ပြရန်။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးကဲ့သို့ပင်စူးရှသောနီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေး (မိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက် '' epinephrine, norepinephrine, သွေးဖိအားများနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းတိုးပွါးDeVito et al ။ , 2014; Foulds et al ။ , 1997; ဟေးလ်နှင့် Wynder, 1974; Mendelson et al ။ , 2008; Minami et al ။ , 1999; Sofuoglu et al ။ , 2012, 2001; Tsuji et al ။ , 1996; Wilkins တို့ et al ။ , 1982) ။ နီကိုတင်း၏ acute အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်း LF HRV တိုးပွါး, (HF HRV လျော့ကျနှင့် LF / HF HRV ၏အချိုးအစားကိုတိုးပွားစေAshare et al ။ , 2012; Barutcu et al ။ , 2005; Karakaya et al ။ , 2007; Kobayashi et al ။ , 2005; Minami et al ။ , 1999) ။ စီးကရက် chippers (မိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်ထက်နီကိုတင်းဖို့ကပိုအားကောင်းတဲ့သွေးဖိအားတုံ့ပြန်မှုများShiffman et al ။ , 1992) ။ လျော့နည်းသွား epinephrine နှင့် norepinephrine အဆင့်ဆင့်နှင့် LF / HF HRV (ခုနှစ်တွင်လျှော့ချခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည် abstinence ပေးစေလိုပါတယ်လှုပ်ရှားမှုပုံမှန်ပုံMinami et al ။ , 1999) ။ နီကိုတင်းထို့ကြောင့်စူးရှသောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် abstinence ကျော်ပုံမှန်ကြောင်းခြုံငုံသေံနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အရံပေးစေလိုပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှု system ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်။
2.2 ။ ဆေးခြောက်
2.2.1 ။ အလင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဆေးခြောက်၏ acute ဆိုးကျိုးများ
Δ1-tetrahydrocannabinol (THC) ဆေးခြောက်၏ psychoactive အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ THC ၏အုပ်ချုပ်ရေး (နှစ်ဦးစလုံးတိရိစ္ဆာန်အတွက် corticosterone / cortisol နှင့် ACTH မြှင့်လုပ်ဆောင်Kubena et al ။ , 1971; Marty; n-Calderon, et al, 1998 ။; Puder et al ။ , 1982) နှင့်လူ့နမူနာ (D'Souza et al ။ , 2004; Hollister et al ။ , 1970; Ranganathan et al ။ , 2009) ။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးအပေါ် exogenous cannabinoids ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု (နှစ်ခုလုံးကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုအားထုတ်, ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ပါသည်Puder et al ။ , 1982) ကို hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယနှစ်ဦးစလုံးနှင့် basolateral amygdala အပါအဝင်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများ, (မှတဆင့်Armario, 2010) ။ acute ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်ပါးစပ် THC HR အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတိုးခြင်းနှင့်သွေးရည်ကြည် epinephrine (နှင့်အတူနှလုံးသွေးကြော arousal လှုံ့ဆော်သောက်သည်Hollister et al ။ , 1970) နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းတိုးပွါး (Lindgren et al ။ , 1981; Strougo et al ။ , 2008; Zuurman et al ။ , 2010).
2.2.2 ။ မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများသည်အတွက်ဆေးခြောက်၏ acute ဆိုးကျိုးများ
နာတာရှည်အသုံးပြုသူများသည်အတွက်သောက်သည်ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်ပါးစပ် THC ၏ acute အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းပေးစေလိုပါတယ်နှင့် HPA ဝင်ရိုးနှစ်ခုလုံးကိုလှုံ့ဆော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးနှငျ့ ပတျသကျ. , ဆေးလိပ်သောက်ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိသွေးကြောသွင်း THC ဖြစ်စေတုံ့ပြန် cortisol တိုး (အစီရင်ခံထားသည်Cone et al ။ , 1986; D'Souza et al ။ , 2008; Ranganathan et al ။ , 2009) ။ ဒါဟာကျန်းမာတဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွက် cortisol တိုးနှိုင်းယှဉ်သောအခါသို့သော် Disorders သည်အသုံးပြုသူများအတွက် THC-သွေးဆောင်မြင့်တက် (ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့သည်D'Souza et al ။ , 2008; Ranganathan et al ။ , 2009) ။ နှစ်ပတ်အတွင်း၏သင်တန်းကျော် THC ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှု (အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်မျှော်လင့်ထားသည့် cortisol မြင့်တက်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေBenowitz et al ။ , 1976) ။ မိုးသည်းထန်စွာဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများကလေ့လာပိုမိုမြင့်မား Basal cortisol ပမာဏနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဤသည်မှာယခင်တွေ့ရှိချက် (Cuttler et al ။ , 2017; ရှငျဘုရငျ et al ။ , 2011) နှင့်ပင် abstinence ၏ခြောက်လအကြာတွင်အဆင့်မြင့်ထော (Somaini et al ။ , 2012) ဆက်လက်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှု HPA ဝင်ရိုးအတွက်ရေရှည်တည်တံ့ adapter နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာနာတာရှည်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းစိတ်ဖိစီးမှု function ကိုသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ပွောငျးလဲလျှင်, ဤလေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီး, ကမရှင်းလင်းကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ အချို့သောလေ့လာမှုတွေ THC epinephrine နှင့် norepinephrine အာရုံစူးစိုက်မှု (impact မဟုတျကွောငျးတှေ့ပွီနေစဉ်Dumont et al ။ , 2009), THC (နာတာရှည်အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးသိသိသာသာတိုးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်ပါဘူးDumont et al ။ , 2009; Haney et al ။ , 2016; Lindgren et al ။ , 1981; Ramesh et al ။ , 2013; Vandrey et al ။ , 2013), သို့သော်ဤတုံ့ပြန်မှု (မိုးသည်းထန်စွာနဲ့အလင်းဆေးခြောက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအကြားကွာခြားပါဘူးHaney et al ။ , 2016) ။ ထို့ကြောင့်ဆေးခြောက်၏ psychoactive အစိတ်အပိုင်းများမှစူးရှသောထိတွေ့မှု HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ arousal တိုးပွါး, ဒါပေမယ့်ရံ catecholamines အပေါ်သက်ရောက်မှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖြစ်ကြပြီးပိုပြီးသုတေသနလိုအပ်ပါသည်။ ဆေးလိပ်သောက်၏ရုတ်တရက်ချုပ်ရာကိုလည်း (သွေးဖိအားသိသိသာသာတိုးမြှင့်စေVandrey et al ။ , 2011); သို့သော်နှလုံးခုန်နှုန်းအတွက် abstinence-related တိုး (နှောင့်နှေးနေကြHaney et al ။ , 2018).
2.3 ။ စိတ်ကြွဆေး
2.3.1 ။ ရင်တော့မှားမယ်သို့မဟုတ်အလင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ကြွဆေး၏ acute ဆိုးကျိုးများ
ကိုကင်း (ကင်း-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်များတွင် corticosterone နဲ့ Cortisol တိုးပွါးBorowsky နှင့် Kuhn, 1991; Levy et al ။ , 1991; Moldow နှင့် Fischman, 1987; Saphier et al ။ , 1993; Sarnyai et al ။ , 1992) နှင့်လူသားမြားသညျ (Heesch et al ။ , 1995) အထိုး-မှီခိုဖက်ရှင်ပါ။ အလားတူပင်ကင်းလည်း (အထီးကြွက်များတွင် ACTH တိုးပွါးBorowsky နှင့် Kuhn, 1991; Kuhn နှင့် Francis က, 1997; Levy et al ။ , 1991; Moldow နှင့် Fischman, 1987), ဒီတစျခုကလူ့လေ့လာမှုမှာပုံတူကူးယူမခံခဲ့ရပေမယ့် (Heesch et al ။ , 1995) ။ ထို့အပွငျက CRF ကိုကင်းများ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားထဲမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါပုံပေါ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအကြောင်း Peripheral အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါ CRF, HPA တုံ့ပြန်မှုလုပ်ကွက်သက်ရောက်မှု (ကိုတွေ့Sarnyai et al ။ , 1992) ။ အမျိုးသမီးကြွက်အထီးထက်ကင်းဖို့ပိုကြီးတဲ့ corticosterone တုံ့ပြန်မှု (ရှိခဲ့ပါတယ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်ကျားအရေးပါသောက Moderator ဖြစ်နိုင်သည်Kuhn နှင့် Francis က, 1997) ။ နုံလူဦးရေအများစုအတွက်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများအထီးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြကတည်းကဒီအတွေ့ရှိချက်အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ကိုကင်းလည်း (တိရစ္ဆာန်နမူနာတိုးမြှင် epinephrine နှင့် norepinephrine ခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ်ပေးစေလိုပါတယ်လှုံ့ဆော်Chiueh နှင့် Kopin, 1978) နှင့် (လူသားတစ်ဦးနမူနာအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်းတိုးလာVongpatanasin et al ။ , 2004) ။ လူ့မော်ဒယ်များခုနှစ်တွင်ကင်းသိသိသာသာ HR တိုးပွါးခြင်းနှင့်လျှော့ HF HRV (နေဖြင့်သက်သေအဖြစ် parasympathetic ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏လုပ်ဆောင်မှုလျော့ကျစေပါတယ်Vongpatanasin et al ။ , 2004).
စိတ်ကြွဆေး၏နောက်ထပ်အုပ်စုတစု, အမ်ဖီတမင်းသည် HPA ဝင်ရိုးနှင့် adrenergic system ပေါ်တွင်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ကိုကင်းနှင့်ဆင်တူ, အမ်ဖီတမင်း (လူ့အတွက်တုံ့ပြန် cortisol ကိုတိုးမြှင့်က de ကျေး et al ။ , 2007; dos Santos et al ။ , 2011; Halbreich et al ။ , 1981; Jacobs et al ။ , 1989; Nurnberger et al ။ , 1984; LM Oswald et al ။ , 2005; Sachar et al ။ , 1980; Söderpalm et al ။ , 2003; Wand et al ။ , 2007; အဖြူရောင် et al ။ , 2006) နှင့်ကြွက်နမူနာ (Knych နှင့် Eisenberg, 1979; Swerdlow et al ။ , 1993) ။ ကအနည်းဆုံးခြောက်ကြိမ်စိတ်ကြွဆေးကိုသုံးပြီးတစ်သမိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, ဒါပေမယ့်သူကိုမှီခိုကြဘူး, (စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန် cortisol အတွက်တိုးပွားလာခဲ့သည်Harris က et al ။ , 2006, 2003) ။ CRF နှင့်အခြား neurotransmitters (cortisol အတွက်ဆေးခြောက်-သွေးဆောင်တိုးဖျန်ဖြေArmario, 2010; Swerdlow et al ။ , 1993) ။ တိုးမြှင့် norepinephrine ခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ် HPA ဝင်ရိုးအပေါ်လုပ်ရပ်များအပြင်, စိတ်ကြွဆေးလည်း (သွေးဖိအား adrenergic တုံ့ပြန်မှုကိုလှုံ့ဆျောNurnberger et al ။ , 1984), သွေးပေါင်ချိန် (Nurnberger et al ။ , 1984), နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်း (က de ကျေး et al ။ , 2007) ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား acute (ကြုံတွေ့၏ပေးစေလိုပါတယ်မြှင့်လုပ်ဆောင်ပေမယ့် norepinephrine metabolite အားဖြင့်ရည်ညွှန်း, 3-methoxy-4-hydroxyphenylethylene glycol (MHPG) အဖြစ်မဟုတ်မှီခို, စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲသူများကHarris က et al ။ , 2006).
2.3.2 ။ မှီခိုသည်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ကြွဆေး၏ acute နှင့်နာတာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
အများအပြားကလေ့လာမှုများကိုကင်း corticosterone လျှို့ဝှက်ချက် (တွေ့မြင်တိုးပွါးကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ Marinelli နှင့် Piazza, 2002 ) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။ အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကင်း (မြင်သောအခါလူသားမြားသညျတှငျ, နာတာရှည်ကင်းအသုံးပြုသူများသည်လည်းပိုမိုမြင့်မား cortisol နှင့် ACTH အဆင့်ဆင့်ကိုပြသ Manetti et al ။ , 2014 ပြန်လည်သုံးသပ်များအတွက်) နဲ့ Cortisol ၏မြင့်မားသော Basal အဆင့်ဆင့် (Haney et al ။ , 2001) ဖြစ်စေ abstinence အားဖြင့်မပြောင်းလဲဖြစ်ကြောင်း (McDougle et al ။ , 1994; Mendelson et al ။ , 1988) သို့မဟုတ်ကင်းကနေစဉ်ဆက်မပြတ် abstinence နှင့်အတူလျှော့ချ (Buydens-Branchey et al ။ , 2002) ။ ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်း (catecholamines အဆင့်ဆင့်အပါအဝင် adrenergic တုံ့ပြန်မှုတိုးလာSofuoglu et al ။ , 2001), သွေးပေါင်ချိန်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်း (Esel, 2001; မြင် Foltin et al ။ , 1995 ပြန်လည်သုံးသပ်သည် ဖြစ်. , Kollins နှင့် Rush, 2002; Kosten et al ။ , 1996; Lynch et al ။ , 2008, 2006; ရိဒ် et al ။ , 2006; Walsh et al ။ , 2009) ထိုး-ရသည် (Collins et al ။ , 2007; Foltin et al ။ , 2003; Lynch et al ။ , 2006) ။ အချို့လေ့လာမှုများ (ကိုကင်းဖို့ထပ်ခါထပ်ခါထိတွေ့အများဆုံးကြံ့ခိုင်တုံ့ပြန်မှုဓာတ်ခွဲခန်း-စောင့်ကြည့်ကင်း Bing ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်အတူကင်းဖို့နှလုံးခုန်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု sensitizes ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြKollins နှင့် Rush, 2002; Walsh et al ။ , 2009, 2000) ။ တခြားလေ့လာမှုကို (ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ကနဦးမြင့်တက်ပြီးနောက်, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ဦးချင်းစီမူးရူးအဆင့်ဆင့်မှဒဏ်ခံဖြစ်လာကြောင်းအကြံပြု flattens, တွေ့ရှိခဲ့Bitmead နှင့် Bitmead, 1984; Foltin et al ။ , 2003; ရပ်ကွက် et al ။ , 1997) ။ ခြုံငုံတိုးဖို့ဧရိယာ-အောက်မှာ-The-ကွေးနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့် HR တုံ့ပြန်မှုရိဒ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ '(1984) ခှဲစိတျဟာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအတွက်တိုးလာမှုကြောင့်ဆက်စပ်တွေကိုနှင့်အတူတွဲဖက်မှုအုပ်ချုပ်ရေး၏အခြေအနေတုံ့ပြန်မှုမှဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုသည်။ ကိုကင်း intranasal တုံ့ပြန်နှလုံးကျုံ့သွေးပေါင်ချိန်ကဲ့သို့စူးရှသော abstinence အတွင်း norepinephrine metabolite MHPG (တိုးပွါးMcDougle et al ။ , 1994) ။ Basal နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့် (နာတာရှည်ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ခြီးမွှောကျနေကြတယ်Sharma က et al ။ , 2016).
နာတာရှည်အသုံးပြုသူများသည်အတွက် cortisol ပမာဏအပေါ်အမ်ဖီတမင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA သို့မဟုတ် "ecstasy") အသုံးပြုသူများသည်အလင်းမကြာသေးခင်အသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ် Non-သုံးပြီးထိန်းချုပ်မှု (ထက်ပိုမိုမြင့်မားဆံပင် cortisol ပမာဏခဲ့Parrott et al ။ , 2014) ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရလဒ်များအရအိပ်ယာကုသမှုအပေါ်နေချိန်မှာစိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲခြင်း (naltrexone အပေါ်စိတ်ကြွဆေး-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီမှအုပ်ချုပ်မှုဆွေမျိုးပြီးနောက်သိသိသာသာနိမ့် cortisol level ကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့Jayaram-Lindströ et al ။ , 2008); သို့သော်အခြားလေ့လာမှုအတွေ့အကြုံရှိ Non-မှီခိုသည်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ကြွဆေး-တိုးလာ cortisol နှင့် ACTH တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုး၏ Basal အဆင့်ဆင့်အပေါ်အမ်ဖီတမင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှင်းရှင်းလင်းလင်း-ဖြတ်မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့လေ့လာမှုများ Non-ကုသမှုရှာကြံနာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲသူများက (အနိမ့်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ကြပြီCarson et al ။ , 2012) သို့မဟုတ် Basal cortisol ပမာဏမကွဲပြားမှု (Zorick et al ။ , 2011) ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်ပါက။ အဆုံးစွန်သောဆက်စပ်မှုလေ့လာမှု abstinence ၏လေးပတ်ပြီးနောက်စိတ်ကြွဆေးမှီခိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားမျှကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ကြွဆေး-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအပြုသဘော (အဆုံးစွန်သောဆက်နွယ်နေကြောင်း, တိုးမြှင့ LF HRV နှင့်အတူစာနာသေံပြောင်းလဲ HF HRV လျော့နည်းသွားနှင့်ပိုမိုမြင့်မား LF / HF အချိုးအစားနှင့် သာ. ကြီးမြတ်အသုံးပြုမှုခဲ့သည်ဟင်နရီ et al ။ , 2012) ။ ပိုများသောသုတေသနအမ်ဖီတမင်းအပြည့်အဝလှုံ့ဆော်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရှိသည်သောသက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
2.4 ။ အရက်
2.4.1 ။ အလင်းသောက် / ရင်တော့မှားမယ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အရက်၏ acute ဆိုးကျိုးများ
အရက် acute Non-မှီခိုသည်အသုံးပြုသူများအတွက် HPA ဝင်ရိုးကိုလှုံ့ဆျော။ ကြွက်များတွင်အရက် (တသမတ်တည်းပလာစမာ corticosterone နှင့် ACTH အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီးAllen က et al ။ , 2011; ရစ်ချတ်ဆန် et al ။ , 2008) ။ လူသားမြားသညျတှငျ, cortisol အလားတူတိုး (စူးရှသောအရက်အုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန်မှတ်ချက်ပြုထားသည်Frias et al ။ , 2000; Gianoulakis et al ။ , 1996; Mendelson နှင့် Stein, 1966; Välimäki et al ။ , 1984; WJ et al ။ , 1995) ။ ဒါဟာအရက်၏သက်ရောက်မှု HPA ဝင်ရိုးပေါ်အဓိကအားကြောင့် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအပေါ်အပြုအမူကြောင့်ဖြစ်ပေါ် (ပုံရသည်)Armario, 2010) ။ ပေးစေလိုပါတယ် activation မှလေးစားမှုနှင့်အတူ, တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ (သွေးကြောသွင်းအရက်အုပ်ချုပ်ရေးမှမွငျ့မား epinephrine နှင့် norepinephrine တုံ့ပြန်မှုသရုပ်ပြပါပြီLivezey et al ။ , 1987; အမြဲတမ်းအတွက်, 1960) နှင့်လူသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုးနှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်ဆင်တူသည့်တိရိစ္ဆာန်များတစ်ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည့်အခါအရက်မျှော်မှန်းစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ (လူသားမြားသညျတှငျ, noradrenaline တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်များနှင့် 30 မိအကြောင်းကိုအထွတ်အထိပ်သို့အရက်၏ 0.9 g / ကီလိုဂရမ်သောက်သုံးပြီးနောက်နှင့်4ဇပြီးနောက်မြင့်မားသောရှိနေဆဲHowes နှင့်ရိဒ်, 1985) ။ acute အရက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းတိုးမြှင့်စာနာ arousal ၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း impact မှပေါ်လာသည်။ မြင့်မားသောဆေးများမှအလယ်အလတ်အတွက် acute အရက်အုပ်ချုပ်ရေးတသမတ်တည်း High-အကြိမ်ရေ HRV လျော့ကျခြင်းနှင့်လည်းမြင့်မားအကြိမ်ရေနှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှအနိမ့်အကြိမ်ရေများ၏အချိုးတိုးပွါး, parasympathetic function ကိုမှစာနာတစ်ခုအညွှန်းကိန်း (Romanowicz et al ။ , 2011) ။ စုပေါင်းအဲဒီရလဒ်တွေကိုတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြပြီးအရက် acute နုံအရက်သည်အသုံးပြုသူများအတွက် HPA ဝင်ရိုးနှင့်ပေးစေလိုပါတယ်လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးပြီးဖိအားအနီးကပ်ယာယီနီးကပ်အတွက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါနောက်ထပ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတုံးစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
2.4.2 ။ မူးရူးနှင့်အရက်-မှီခိုနမူနာများတွင်အရက်၏ acute ဆိုးကျိုးများ
persistent မူးရူးသောက်စားမကြာခဏ, လေးလံသောအရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲ activation မှတဆင့် HPA ဝင်ရိုးနှင့်ပေးစေလိုပါတယ် system ကိုပွောငျးလဲ။ Basal cortisol ပမာဏမူးရူးမိုးသည်းထန်စွာယောက်ျား (အတွင်းသို့ခြီးမွှောကျနေကြတယ်လိန်း et al ။ , 2018; ယော et al ။ , 2006) နှင့်အမျိုးသမီး (Wemm et al ။ , 2013) ။ ထို့အပြင်အရက်အုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန် cortisol အတွက်မျှော်မှန်းမြင့်တက်အလင်း / အလယ်အလတ်လူမှုရေးသောက် (မှလေးလံသောဆွေမျိုးအတွက်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့သည်ရှငျဘုရငျ et al ။ , 2006) ။ Basal HRV အဆင့်ဆင့် (ထိုပေးစေလိုပါတယ်၏လျော့နည်းသွားလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုညွှန်း, မိုးသည်းထန်စွာအရက်သောက်ယောက်ျားအတွက်သိသိသာသာနိမ့်မှပေါ်လာယော et al ။ , 2006) ။ ဒါ့အပြင်မိုးသည်းထန်စွာရှိနသောသူတစ်ဦးချင်းစီသောက်ငါးနှစ်မတိုင်မီ (အလင်းသောက်ခဲ့ကြသောသူတို့အားအရက်ဆွေမျိုးတစ်ဦးလျှော့ cortisol တုံ့ပြန်မှုခဲ့ရှငျဘုရငျ et al ။ , 2016).
အရက် (နှစ်ဦးစလုံးမှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက် cortisol ပမာဏလှုံ့ဆော်ရစ်ချတ်ဆန် et al ။ , 2008) နှင့်လူသားမြားသညျ (Adinoff et al ။ , 2003; Feller et al ။ , 2014; Mendelson နှင့် Stein, 1966; Stokes, 1973) ။ တစ်ဦးချင်းအရက်မှရှောင်ကြဉ်သည့်အခါဆုတ်ခွာလည်း (တိုးချဲ့ Basal cortisol ပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Mendelson နှင့် Stein, 1966) နှင့် diurnal အပြောင်းအလဲလျော့နည်းသွား (Adinoff et al ။ , 1991; Risher-ပန်းပွင့် et al ။ , 1988) ။ cortisol သေံလည်း (အလွန်အကျွံသောက်၏ကာလအတွင်းမှာတိုးမြှင့်ခံရဖို့လေ့Wand နှင့် Dobs, 1991) ။ Basal cortisol ပမာဏပိုရှည် abstinence ကာလအတွင်းလျော့ချပေမယ့် (Motaghinejad et al ။ , 2015), abstinence ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမို Basal cortisol ပမာဏနှင့်ဆက်စပ်သည်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်Starcke et al ။ , 2013) ။ အရက်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပေးစေလိုပါတယ်စနစ်၏ activation လည်းအရက်ကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ acute မူးယစ် (MHPG အတွက်တိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Borg et al ။ , 1981) နှင့်, မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီစူးရှဆုတ်ခွာဝင်တတ်သကဲ့သို့, MHPG ၏အဆင့်ဆင့် (သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောက်တိုးကတည်းကအချိန်အဖြစ်လျော့ချHawley et al ။ , 1994) ။ စူးရှသောမူးယစ်စေခြင်းမှတုံ့ပြန်မှုကိုတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ပြီးမဟုတ်ပေမယ့်, သပ္ပါယ် HRV လုပ်ငန်းဆောင်တာလည်းတိုက်ရိုက်အရက်မှီခိုအားဖြင့်ပြင်ဆင်ထား၏။ Meta-analysis သည်အရက်မှီခို, မခွဲခြားဘဲကုသမှု setting ကို၏, (Basal HF HRV အဆင့်ဆင့်အတွက်ကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကင်တားနား et al ။ , 2013) ။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကို HPA နှင့်ပေးစေလိုပါတယ်တုံးတစ်ခုသို့မဟုတ် phasic တုံ့ပြန်မှုဒါပေမယ့်ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုးမူးရူး / Disorders သည်အသုံးပြုသူများအတွက်မြင့်မားသောလုပ်သူများအဆင့်ဆင့်၏မရှိခြင်းရှိကွောငျးထိုကဲ့သို့သောတက်ကြွမူးရူးနှင့်နာတာရှည်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတုံ့ပြန် neuroadaptations ထောက်ပြ။
2.5 ။ Opioids
2.5.1 ။ မဟုတ်သောနှင့်အလင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက် opioids ၏ acute ဆိုးကျိုးများ
အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်မတူဘဲ opioids လူသားနှိုင်းယှဉ်ပါကကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက် (ACTH နှင့် corticosterone တိုးပွါးဘာကင်ဟမ်နှင့် Cooper က, 1986; Eisenberg, 1985; Suemaru et al ။ , 1989) သညျလူသားတို့အတွက်, မော်ဖင်းအကိုက်အတွက် HPA တုံ့ပြန်မှု dampens, သော်လည်း (Delitala et al ။ , 1983; ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 1974; Rittmaster et al ။ , 1985; Zis et al ။ , 1984) ။ Naloxone တစ်ခု opioid ရန်, (လူသားများတွင် ACTH နှင့် cortisol ပမာဏတိုးပွါးမမေ့ဘူး et al ။ , 1986; Naber et al ။ , 1981) နှင့်ဝက် (ရစ်ချတ် et al ။ , 1986; Rushen et al ။ , 1993) ။ opioids တိုက်ရိုက် HPA ဝင်ရိုး impact ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ (ရှိပါသည်Vuong et al ။ , 2010) HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်ရန်။ အဆိုပါပေးစေလိုပါတယ်အပေါ် opioids ၏သက်ရောက်မှု CRF မှ HPA ဝင်ရိုး၏တုံ့ပြန်မှုလျော့ကျလာအတူရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်, မော်ဖင်းအကိုက် (အ epinephrine နှင့် norepinephrine တုံ့ပြန်မှုအပေါ်ကန့်သတ်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့Rittmaster et al ။ , 1985) ။ opioids နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးဖိအားလျော့ကျပေမယ့် (Suemaru et al ။ , 1989), High-အကြိမ်ရေ HRV (opioids အားဖြင့်ယုတ်လျော့ခံရဖို့ပြသထားသည်Latson et al ။ , 1992).
2.5.2 ။ မှီခိုနမူနာအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအပေါ် opioids ၏နာတာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
လူ့နမူနာ, opioids နှင့် methadone နှင့် buprenorphine အပါအဝင် opioid agonists, ခုနှစျတှငျ acute cortisol ပမာဏဖိနှိပ် (Cami et al ။ , 1992; Mendelson et al ။ , 1975; Nava et al ။ , 2006; Walter et al ။ , 2011, 2008) နှင့် Basal cortisol ပမာဏ (ကျန်းကျန်းမာမာထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါက opioid-မှီခိုသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လေ့Walter et al ။ , 2011) ။ တစ်ခုမှာအစောပိုင်းလေ့လာမှု (cortisol ဘိန်းဖြူအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်မပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရMendelson et al ။ , 1975); တစ်ဦးထက်ပိုသောမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု, ထို diacetylmorphine တွေ့ရှိခဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုထုံးများအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်ဘိန်းဖြူများဆေးဝါးဗားရှင်း, (ပိုပြီးဒါ methadone ထက် cortisol ပမာဏလျော့နည်းသွားWalter et al ။ , 2011) ။ opioids ကနေဆုတ်ခွာ (မသက်ဆိုင်က naloxone စိန်ခေါ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ခဲ့သည်ရှိမရှိ၏ ACTH နှင့် cortisol ပမာဏအတွက်သိသာထင်ရှားသောလုပ်သူများတိုးနှင့်အတူကိုက်ညီGerra et al ။ , 2003) သို့မဟုတ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသဘာဝဖြစ်ပွားခဲ့သည် (ရှီ et al ။ , 2009) ။ သွေးကြောသွင်း opioids ၏ acute အုပ်ချုပ်ရေးနှလုံးခုန်နှုန်း (တစ်ဦးနှောင့်နှေးလျှော့ချခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်ကိုနှလုံးခုန်နှုန်းအတွက်ကနဦးမြင့်တက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကနေဒီ et al ။ , 2015; Rook et al ။ , 2006) ။ ရလဒ်တစ်ဦးကအလားတူပုံစံဟာ SAM ကို system ပေါ်တွင်ဆုတ်ခွာ-related သက်ရောက်မှုများအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အထူးသ epinephrine, norepinephrine, LF HRV နှင့် naloxone-သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာဖို့တုန့်ပြန်သွေးပေါင်ချိန်တိုး (ဟော့ဖ်မန်း et al ။ , 1998; Kienbaum et al ။ , 1998; မက်ဒေါ်နယ် et al ။ , 1999).
ယခင်အပိုင်းများတွင်တင်ဆက်ပြန်လည်သုံးသပ်၏အခြေခံတွင်, စားပွဲတင် 1 phasic HPA ဝင်ရိုး၏ညှနျကွားအကျဉ်းချုပ်နှင့်ပေးစေလိုပါတယ်ရင်တော့မှားမယ် / Non-disorders နှင့်ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုးမူးရူး / မိုးသည်းထန်စွာနှင့်မှီခိုအသုံးပြုသူများနှင့်ထိုအတုံ့ပြန်မှုအတွက်အလိုက်အထိုက်နေတတ်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ခုချင်းစီ psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး၏စူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်မှု။
Non-disorders / ပေါ့ပေါ့ဘာသာရပ်များသုံးပြီးနှင့်တက်ကြွစွာမူးရူး / disorders ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုသူများကို အသုံးပြု. အတွက် acute မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှု။
Bing / disorders vs.
ရင်တော့မှားမယ် / Non-disorders *
နီကိုတင်း ↑ ↑ ↓ ↓
ကိုကင်း ↑ ↑ ? ?
ဖက်တမင်းဆေးပြား ↑↓ ↑ ? ?
ဆေးခြောက် ↑ ↑ ↓ ↑
အရက် ↑ ↑ ↓ ↑
မှတ်ချက်: HF HRV parasympathetic တုံ့ပြန်မှု၏ရောင်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် LF HRV တစ်ခု activated စာနာအာရုံကြောစနစ်တုံ့ပြန်မှုပြဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်းစာနာနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ activation အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
ပေါ့ပေါ့တန်တန် (အလွန်နိမ့်အဆင့်ဆင့်မှာ Non-အပတ်စဉ်အသုံးပြုမှု) ကို အသုံးပြု. Non-disorders အတွက် HPA ဝင်ရိုးနှင့်ပေးစေလိုပါတယ်အပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါး * ထူးခြားသော phasic သက်ရောက်မှု / ဘာသာရပ်များတက်ကြွစွာမူးရူး / Disorders သည်အသုံးပြုသူများကိုအသုံးပြုပြီးနှိုင်းယှဉ်ပါက။
↑ activation ညွှန်ပြ; ↓လျှော့ချရေးဆိုတာကိုပြသ; ↑↓ရောထွေးရလဒ်များကိုညွှန်ပြ; = အလားတူတုံ့ပြန်မှုဆိုတာကိုပြသ; ? အနာဂတ်သုတေသနအတွက်ဒေသများဖော်ပြသည်။
3 ။ စိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒ, ဆုလာဘ်, တဏှာနှင့် relapse အန္တရာယ်အတွက်မူးယစ်ဆေး-related အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်
ယခင်အပိုင်းများနှင့် စားပွဲတင် 1 စူးရှသောနီကိုတင်းအဘို့အဆွ၏ဆိုးကျိုးများ, ဆေးခြောက်, လှုံ့ဆော်ခြင်း, အရက်, လူသားအတွက်စူးရှ opioids ၏စိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုနှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒအပေါ်အသုံးအများဆုံး psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အစွမ်းထက်သက်ရောက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ပို. အရေးကြီးသည်, မူးယစ်ဆေးဝါး၏ပုံမှန်အစည်းအဝေး, Bing နှင့်နာတာရှည်အသုံးပြုမှုစိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒအတွက်သိသာထင်ရှားသောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ပြဤစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲပစ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအကြိမ်ရေနှင့်ပြင်းထန်မှု, HPA ဝင်ရိုးထဲမှာ adapter နဲ့ Basal အဆင့်ဆင့်အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းမူးယစ်ဆေး, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိန်ခေါ်မှုမှ phasic တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲမှုများအဖြစ်မှုကိုထငျရှားစပေးစေလိုပါတယ်လမ်းကြောင်းအတွက်ကိုအရှိန်အဖြစ် (ကြည့်ရှု al'Absi, 2006 နီကိုတင်း၏သုံးသပ်ချက်ကိုသည် ဖြစ်. , Ashare et al ။ , 2012; မြင် လိန်းနှင့် Sinha, 2017 အရက်၏သုံးသပ်ချက်ကိုသည် ဖြစ်. , McKee et al ။ , 2011; McRae-Clark က et al ။ , 2011) ။ အလှည့်၌, cortisol အတွက်ဆုတ်ခွာ-related Basal တိုး (သိမြင်မှုချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Errico et al ။ , 2002) ။ အလှည့်များတွင်ဤသိမြင်မှုချို့ယွင်း (မြင်စွဲ၏ဆိုးရွားလာနေသောရှည်နိုင် Bernardin et al ။ , 2014; Besson နဲ့မေ့, 2016; Spronk et al ။ , 2013 ) ဆွေးနွေးမှုသည်။
ဤသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသက်သေအထောက်အထားစိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒထိုသို့သောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏မျှသာအကျိုးဆက်များရှိမရှိ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာလည်းနာတာရှည်အသုံးပြုသူများသည်အတွက် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် relapse အန္တရာယ်လှုံ့ဆျောမှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေစေခြင်းငှါ interoceptive မူးယစ်ဆေး-related adaptor တစ်ခုအနေနဲ့ဝတ်ပြုလျှင်၏မေးခွန်းကိုအသနားခံ။ psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများအတွက်အရေးပါအဖြစ် mesolimbic striatal dopaminergic လမ်းကြောင်းအပေါ်အာရုံစိုက်ဆယ်စုနှစ်များစွာရှိခဲ့သည်။ striatal လိုက်လျောညီထွေ compulsive မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆျောမှုကားမောင်းစေခြင်းငှါနေစဉ်အခြား positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) သက်သေအထောက်အထားများ (cortisol အတွက် psychoactive မူးယစ်ဆေး-နှိုးဆွတိုးမြင့်မားသည့် striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းညွှန်ပြBooij et al ။ , 2016; ကော့ et al ။ , 2009; Wand et al ။ , 2007) နှင့်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် cortisol တိုးကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္မူးယစ်နှင့်ဆက်နွယ်နေကြ (Oswald et al ။ , 2005) ။ အလားတူပင်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုဒေါသလည်း dopamine အဆိုပါ striatum အတွက်ဂီယာနှင့် PFC (တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီးNagano-Saito et al ။ , 2013; Pruessner et al ။ , 2004) နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအား cortisol တုံ့ပြန်မှု (စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်မှုအပြီးဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းHamidovic et al ။ , 2010) ။ တစ်ဦး functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ခုနှစ်, ကြံ့ခိုင် striatal activation အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုဒေါသရလဒ်များကို, အထူး ventral striatum ပေမယ့်မ dorsal striatum အတွက်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် Non-စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုမှဆွေမျိုး (Sinha et al ။ , 2016) ။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ ventromedial prefrontal cortex နှင့် rostral anterior cingulate cortex အတွက်လှုပ်ရှားမှုဒဏ်ခံဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုအနိမ့်အဆင့်ဆင့်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီအခြား fMRI လေ့လာမှုများမှာ-အန္တရာယ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုပြသကြပါပြီ (striatal-limbic နှင့် prefrontal ဒေသများတွင်တုံးဗဟိုဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်ကာရိုး et al ။ , 2017; Ginty, 2013) လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူနှင့်ဒဏ်ခံဖြေရှင်းထိန်းညှိဘို့အရေးပါဖြစ်ကြောင်း။ အခြားအပေသုတေသန dopamine ဂီယာတစ်ခုအရှုံးအစီရင်ခံထားပါတယ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-အလွဲသုံးစားလုပ်လူနာ dopamine လွှတ်ပေးရန်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေစွဲ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူအဖြစ်မူးယစ်ဆေးနှင့်ကုသမှုမအောင်မြင်ခြင်း (အဘို့အ compulsive လှုံ့ဆျောမှုအတွက်တိုးမြှင်ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Martinez et al ။ , 2011; Martinez နှင့် Narendran, 2010) ။ ထိုအကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ dopamine အပြောင်းအလဲများကိုမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုမှတုံး glucocorticoid တုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေဤဒေတာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် dopaminergic လမ်းကြောင်း၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် activation အလွန်အမင်းအပြန်အလှန်ဖြစ်ကြပြီးနှစ်ဦးစလုံးပူးတွဲ psychoactive မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအတွက်အခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြုကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြခြင်း, compulsive မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆျောမှုပေါ်မှာ။
ကုသမှု-ရှာသို့မဟုတ် Non-ကုသမှုရှာနှင့်စူးရှ abstinent မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားလူနာအများအပြားကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်ထားဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက်နှောင့်အယှက်များနှင့်အတူပိုမိုမြင့်မား Basal cortisol နှင့် HR နှင့်အတူတစ်တုံးစိတ်ဖိစီးမှု cortisol နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး cue, ပြစ်မှားသောအပြစ်မှပေးစေလိုပါတယ်ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုပြခဲ့ကြ HRV တုံ့ပြန်မှု (စားပွဲတင် 2; မြင် Sinha, 2008 နှင့် Milivojevic နှင့် Sinha, 2018 ) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။ ထိုသို့သောတုံ့ပြန်မှုကုသမှုအပြီးတွင်ပိုမိုမြင့်မား relapse အန္တရာယ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြပြီးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး cue ဒေါသသည် (စဉ်အတွင်း သာ. ကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပေါ်Ashare et al ။ , 2012; McKee et al ။ , 2011; Milivojevic နှင့် Sinha, 2018; Sinha, 2011; Sinha et al ။ , 2006) ။ တွေကိုအလေးပေးဖို့ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ cortisol arousal (တွင်လည်းမိုးသည်းထန်စွာသောက်မူးရူးအတွက်အရက်မသောက်ရမှတိုးမြှင့်အရက်လှုံ့ဆျောမှု၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်လိန်း et al ။ , 2018) ။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုများတသမတ်တည်း (ဖြင့်စွဲလမ်းအန္တရာယ်နှင့်ပြင်းထန်မှုနှစ်ခုစလုံးအမှတ်အသားများအဖြစ်ကဤလမ်းကြောင်းပစ်မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြု compulsive မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆျောမှုနှင့် relapse အန္တရာယ်မှအရံနှင့်ဗဟိုစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် adapter နဲ့အပြောင်းအလဲများကိုလင့်ထားသည်Milivojevic နှင့် Sinha, 2018).
Basal ပြည်နယ်နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်အလွဲသုံးစားလုပ်ပစ္စည်းဥစ္စာအတွက် stress- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-cue သွေးဆောင်တုံ့ပြန်မှု။
လုပ်သူများ / Basal ပြည်နယ်
နီကိုတင်း ↑ ↑ ↓ ↑ = ? ↑
ဆေးခြောက် ↑ ↑ ↓ ? ↓ ↑
ကိုကင်း ↑ ↑ ↓ ↑ = ↑ = ↑ =
ဖက်တမင်းဆေးပြား ↑↓ = ↑ ↓  = ? ?
အရက် ↑ ↑ ↓ ↓ = ? ↑
Opioids ↑ ↑ ↑↓ ↓ ↑? ↑
မှတ်စု: လုပ်သူများအဆင့်ဆင့်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုပု HPA ဝင်ရိုးပေါ်ထိတွေ့မှုနှင့် Non-disorders ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနာတာရှည်အတွက်ပေးစေလိုပါတယ်၏စူးရှသော / phasic သက်ရောက်မှု၏တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်, Bing / ပစ္စည်းဥစ္စာ (မစူးရှ abstinence သို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းအတွက်) တစ်ဦးချင်းစီအလွဲသုံးစား။ HF HRV parasympathetic တုံ့ပြန်မှု၏ရောင်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်, LF HRV တစ်ခု activated စာနာအာရုံကြောစနစ်တုံ့ပြန်မှုပြဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်းစာနာနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ activation အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
↑ activation ညွှန်ပြ; ↓လျှော့ချရေးဆိုတာကိုပြသ; ↑↓ရောထွေးရလဒ်များကိုညွှန်ပြ; = အလားတူတုံ့ပြန်မှုဆိုတာကိုပြသ; ↑? = ကန့်သတ်သက်သေအထောက်အထားများပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်; ? အနာဂတ်သုတေသနအတွက်ဒေသများဖော်ပြသည်။
ယခင်အပိုင်းများတွင်တင်ဆက်ပြန်လည်သုံးသပ်၏အခြေခံတွင်ကျနော်တို့အတွက်မူးယစ်ဆေး-စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆျောမှုသံသရာသရုပျဖျောဖို့ heuristic မော်ဒယ်ကိုတင်ပြ သဖန်းသီး။ 2။ အစောပိုင်းကတင်ပြခဲ့သည်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုအကြံပြု feed ကို-ရှေ့ဆက် စိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုအဆငျ့ဆငျ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝရုန်းကန်မှုများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ကြိုးမဲ့ကြိုးတပ်ထားသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုများတိုးပွားလာသည့်အခါဤအရေးပါသောဇီဝဖြစ်စဉ်သည်မသန်မစွမ်းဖြစ်ကာအားနည်းနေသည် အကျိုးဆက်အားဖြင့်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်း၊ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုတုန်ခါနေသောသို့မဟုတ် ပိုမို၍“ သည်းခံနိုင်သော” စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှုများဖြင့် allostasis ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပိုမိုများပြားလာရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာပိုမိုများပြားသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုထပ်မံဖြစ်ပေါ်စေသည့်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ် interaction ကတစ် heuristic မူဘောင်စိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆျောမှုနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုသရုပျဖျောဖို့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ A အလင်းသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအတွက်အရံနှင့်ဗဟိုစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်စူးရှသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ B မူးယစ်ဆေးသင်ယူမှု, neuroflexibility နှင့်ဒဏ်ခံကြံ့ခိုင်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူအလင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအတွက်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ထိန်းချုပ်နိမ့်အဆင့်ဆင့်အတွက်ရလဒ်တွေကိုကြောင်းဖြေရှင်းဝှက်ဤကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဗဟို striatal-prefrontal သက်ရောက်မှုဖော်ပြသည်။ C တစ်ဦးပြောင်းလဲခြင်းနှင့်တုံးစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အားနည်းချက်ရှိသူများအတွက်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ရလဒ်များကြောင့်တိုးလာမူးရူးများနှင့်မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုမှု၏အာမခံလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြသည်။ D အဆိုပါတုံးတုံ့ပြန်မှုထို့နောက်အစာကျွေးခြင်း-ရှေ့ဆက်တိုးလာတဏှာ၏အဆငျ့ဆငျ့, neuroendocrine သည်းခံစိတ်နှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် relapse အန္တရာယ်အတွက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းစူးရှ abstinence / ရုပ်သိမ်းရေးဆိုးကျိုးများအတွက်ရလဒ်များပြသထားတယ်။ E ယခင်ဖြစ်စဉ်များ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမိုအားနည်းချက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဒဏ်ခံစေအလားအလာမော်ဒမီးမောင်းထိုးပြ။
4 ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများထိခိုက်အချက်များ
4.1 ။ တစ်ဦးဖိအားတုံ့ပြန်အပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ
ကျနော်တို့ HPA ဝင်ရိုး၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်ယခင်အပိုင်းအတွက် SAM ကို system ပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အထူးအာရုံစူးစိုက်; တစ်ဦးဖိအားကိုမကြာခဏအရှင်ဖွယ်ရှိဖိအားတုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်ခြင်း, အသုံးပြုမှု precedes ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှလူနာများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအချက်အများအပြားသီအိုရီမှသည်သို့သော်သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထား။ ဒီလေ့လာရေးတစ်ခုစမ်းသပ်မော်ဒယ်များတွင်လေ့လာမှုများတစ်ဖိအားနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တပြိုင်နက်တည်းအုပ်ချုပ်ရေး (သာမန်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုစနစ်က disrupts ကြောင်းပြသကြဗန် Hedger et al ။ , 2017) ။ အရက်သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးတစ်ဖိအားအောက်ပါအုပ်ချုပ်ခွင့်အခါဥပမာ, မူးယစ်ဆေး (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် pharmacological ဖိအားဖို့ cortisol တုံ့ပြန်မှုချို့ယွင်းChild et al ။ , 2010; Söderpalm et al ။ , 2003) ။ တစ်ဦးကိုချက်ချင်းဖိအားပြီးနောက်အုပ်ချုပ်ခွင့်အရက်ကို (အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်တာရှညျနှင့်ဖိအားတုံ့ပြန်မှုအတွက်စွဲလမ်းတိုးလာChild et al ။ , 2011) ။ THC ၏အနိမ့်ဆေးများတစ်ဖိအားပြီးနောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်သောအခါ, ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဒုက္ခဆင်းရဲလည်းတုံးရှိ၏ သို့သော်အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် THC မြင့်မားဆေးများမှာ (တိုးပွားလာခဲ့သည်နှင့်သွေးဖိအားကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့သည်Child et al ။ , 2017) ။ ဆေးလိပ်သောက် relapse ၏လူသားတစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းမော်ဒယ်များတွင်တစ်ဦးဖိအားထိတွေ့မှု (cortisol မှဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သော, ဆေးလိပ်သောက်၏အကြိုးသက်ရောက်မှုတိုးလာMcKee et al ။ , 2011) ။ သို့သော်ဤသက်ရောက်မှုအုပ်ချုပ်မူးယစ်ဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ opioids ခုနှစ်, cortisol အုပ်ချုပ်ရေး (အနိမ့်ထိုးဘိန်းဖြူသုံးစွဲမှုနှင့်အတူလူနာအတွက်တဏှာလျှော့ချရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်Walter et al ။ , 2015) ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်အလွဲသုံးစားမှု၏အခြားတ္ထုများအနေနဲ့ activating အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း opioids အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုး system ပေါ်တွင်တစ်ဦး dampening အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ပေးထားဖြစ်ကောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ထပ်သုတေသနအပြည့်အဝစိတ်ဖိစီးမှု system ကိုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
4.2 ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုလွှမ်းမိုးမူးယစ်ဆေး-related အချက်များ
အတိုင်းအတာများအချက်တွေထဲကတစ်ဦးကအိမ်ရှင် (စူးရှသောမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ဥပမာမကြာသေးမီကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပမာဏ, Rapid နှင့်ပမာဏ, ကျယ်ပြန့်မူးယစ်ဆေးလူတန်းစားအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်စမ်းသပ်ပြီး, အမျိုးအစားဆေးထိုး, အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းကြောင်း) အလားအလာဟာအကျိုးသက်ရောက်နိုင် စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏အစွမ်းသတ္တိကို။ အထူးသ, Allain et al ။ (2015) compulsive မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအန္တရာယ်၏သိသာထင်ရှားသောရှုထောင့်အဖြစ်အကြိမ်ကြိမ်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုမှုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် Rapid ၏ကြိမ်နှုန်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆွေးနွေးပါ။ self-စိတ်ခွန်အားနိုးမူးယစ်ဆေးအသုံးပြုသည်မည်မျှမကြာခဏ၏ရှုထောင့်နှင့်အသုံးပြုမှုမြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဆက်လက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်နှစ်ဦးစလုံးပုဂ္ဂလဒိဋ္မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆျောမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။
သည်အခြားသုတေသနခုနှစ်တွင်ဘုရင်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအမြင့်ဆုံးထိုးအရက် (0.8 g / ကီလိုဂရမ်) အရက်တစ်အနိမ့်ထိုးသော်လည်းအလင်းသောက်အတွက် cortisol ပမာဏတိုးမြှင့် (0.4 g / ကီလိုဂရမ်) မနှင့်မိုးသည်းထန်စွာမူးရူးသောက် (တုံး cortisol တုံ့ပြန်မှုပြသတွေ့ရှိခဲ့ရှငျဘုရငျ et al ။ , 2006) ။ သို့သော်ငြားလည်း, လိန်း et al ။ (2018) တစ်ဦးအမူအကျင့်လှုံ့ဆျောမှုပါရာဒိုင်းအောက်မှာကျွမ်းလောင်အရက်ဘီယာအနိမ့်အဆင့်ဆင့်အလယ်အလတ် Non-မူးရူးနှင့်မူးရူး-မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများသည်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် cortisol တိုးမြှင့်ပြသခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်းပါးတွေသွေးကြောသွင်း, intranasal, ပါးစပ်နှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်အုပ်ချုပ်ရေးနည်းစနစ်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုလမ်းကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ (၏ reactivity ကိုအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မယ်လို့ထားတဲ့စုပ်ယူမှုနှုန်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်Gourlay နှင့် Benowitz, 1997) ။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အတိုင်းအတာများထည့်သွင်းစဉ်းစားလူတန်းစားမူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှုအပေါ်မကြာသေးမီကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသမိုင်း၏သက်ရောက်မှုသည်။ ဥပမာ, Ramchandani et al ။ (2002) လေ့လာမှုမှာပါဝင်ရှေ့တော်၌ထိုအတိတ်လ၌သောက်တိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိရကာသွေးကြောသွင်းအရက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်စူးရှသောပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့် psychomotor တုံ့ပြန်မှုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီအများစုမှာလေ့လာမှုများတစ်ဦးချင်းစီကြိုတင်လေ့လာမှုမှာပါဝင်မယ့်အခြို့သောကာလအတွက် abstinent ကျန်ကြွင်းသောလိုအပ်ပြီ သို့သော်အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုများကြိုတင် abstinence စတင်ဖို့ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပြီး, အရှင်, abstinence သူတို့ရဲ့အရှည်ပေါ် မူတည်. မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးမှ differential ကိုတုံ့ပြန်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ Relatedly သည် HPA ဝင်ရိုးအပေါ်ဆုတ်ခွာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးတော်မူသောကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးဖို့စိတ်ဖိစီးမှု system ကိုတုန့်ပြန်ဆုတ်ခွာသူတို့ရဲ့စင်မြင့်ပေါ် မူတည်. လည်းကွဲပြားစေခြင်းငှါလည်းဖွယ်ရှိသည်။
4.3 ။ စိတ်ဖိစီးမှုမှတုံ့ပြန်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအချက်များ
မိသားစုသမိုင်း: အခြားလေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောအရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ၏မိသားစုသမိုင်းအဖြစ်ပါဝင်သူအချက်များ, စတဲ့အခန်းကဏ္ဍစခွေငျးငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်တစ်မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူ non-မှီခိုသင်တန်းသားများကိုတသမတ်တည်းထိုကဲ့သို့သောမိသားစုသမိုင်းမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီမှ cortisol နှင့် ACTH ဆွေမျိုးတစ်ဦးအရက်-သွေးဆောင်လျှော့ချရေးပြသကြပါပြီ (Schuckit et al ။ , 1996; Zimmermann et al ။ , 2004) ။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက်ဗီဇပြီးသား predisposed စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်ဦးချင်းစီမှီခိုအသုံးပြုသူများသည်နှင့်တူ reactivity ကို၏ပုံစံများပြသသောအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှု co-ဖြစ်ပေါ်: တစ်ခုတည်းမူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်မှီခိုခဲ့နမူနာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးသုတေသနလေ့လာမှုများအများစုဟာ; သို့သော်ဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်ကုသမှုရှာသောသူအမြားဆုံးတစ်ဦးချင်းစီကမူးယစ်ဆေးဝါးအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သတင်းပို့သို့မဟုတ်အခြားတ္ထုများအပေါ်မှီခိုနေတဲ့သမိုင်းရှိသည်။ နီကိုတင်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းအတွေ့အကြုံကို သာ. ကြီး (နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီPerkins et al ။ , 2009) ။ တစ်ခုတိုးလာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆင်းရဲသောသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကိုကင်းနှင့်ဆေးခြောက်ရလဒ်များပေါင်းလိုက်သောအုပ်ချုပ်မှုတစ်ဦးတည်းမူးယစ် (ဖြစ်စေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကFoltin et al ။ , 1995, 1993; 1987; Foltin နှင့် Fischman, 1990) ။ တခြားလေ့လာမှုမူးယစ်ဆေးတစ်ခုတိုးမြှင်စူးရှသောပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု system ကိုတုန့်ပြန် (ထဲမှာ MDMA ရလဒ်များကိုနှင့်အတူဆေးခြောက်၏ပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှုကိုတွေ့ပြီDumont et al ။ , 2009; Kollins et al ။ , 2015) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေတွေ့ရှိချက်အရက်သို့မဟုတ်ကင်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဆေးခြောက်မှီခို၏သမိုင်း HPA stress- တုံ့ပြန်ဝင်ရိုးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-related တွေကို (dysregulates ကြောင်းညွှန်ပြFox က et al ။ , 2013) ။ နီကိုတင်းကို (Self-အုပ်ချုပ်ရေးအရက်တိုးပွါးBarrett et al ။ , 2006) နှင့်, နီကိုတင်း၏အနိမ့်ဆေးများမှာ (ထို VTA အတွက်အရက်-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါးTizabi et al ။ , 2002) ။ ဒီနေသော်လည်းကျနော်တို့ polysubstance မမှန်များ၏သက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်အခြားအတိတ်မူးယစ်ဆေးသမိုင်းအကြောင်းကိုနည်းနည်းသိ HPA ဝင်ရိုးများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှပေးစေလိုပါတယ်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်ရှိပါတယ်။
ကျားမ: မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှုကိုလည်းကျားမအားဖြင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများ, အလုံးစုံ, လူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများပိုမို sensitivity ကိုအစီရင်ခံရန်လေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အမျိုးသမီးများကိုယောက်ျား (နှိုင်းယှဉ်ပါကသွေးကြောသွင်းနီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေး၏ဆိုးကျိုးများကိုပိုမို sensitivity ကိုပြသလေ့DeVito et al ။ , 2014; Sofuoglu နှင့် Mooney, 2009), လူ (နီကိုတင်း၏ သာ. ကွီးမွတျကနဦးဆုလာဘ် sensitivity ကို intranasal အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြသလေ့ရှိပါတယ်Perkins et al ။ , 2009) ။ ကိုကင်းမှတုန့်ပြန်, အမျိုးသမီး (အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ သာ. ကြီးမြတ်စိုးရိမ်စိတ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်Kosten et al ။ , 1996) နှင့်မြင့်မားသောလျှော့ချ (Lynch et al ။ , 2008) လူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက။ အမျိုးသားများအတွက် (striatal ဒေသများတွင်ပိုမိုမြင့်မားစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်ရှိသည်နှင့်မိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကမူးယစ်ဆေးဝါး၏ correspondingly ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံရန်လေ့Munro et al ။ , 2006) ။ အမြိုးသမီးမြားတှငျဤမူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏သက်ရောက်မှုကိုလည်းရာသီစက်ဝန်းကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားလိမ့်မည်။ အရက်ဇီဝြဖစ်ဖျက်သိမ်းရေး၏ပိုမြန်နှုန်းအစောပိုင်း follicular နှင့် ovulatory အဆင့် (နှိုင်းယှဉ်ပါကနှစ်လယ်ပိုင်း luteal အဆင့်မှတ်ချက်ချကြသည်ထိုကဲ့သို့သော, ရာသီစက်ဝန်းကိုဖြတ်ပြီးမတူSutker et al ။ , 1987) ။ သူတို့ရဲ့သံသရာ၏ luteal အဆင့်အမျိုးသမီးများနေ့ (ကိုကင်းမှတုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွားပြသSofuoglu et al ။ , 1999), နီကိုတင်း (DeVito et al ။ , 2014), နှင့်စိတ်ကြွဆေး (တရားမျှတမှုနှင့်က de ကျေး, 1999) သူတို့၏ follicular သံသရာအတွက်သူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက။ တဦးတည်းလေ့လာမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်လိင်နှင့်ရာသီစက်ဝန်း၏ကန့်သတ်သက်ရောက်မှုကိုကင်း intranasal တွေ့ရှိပေမယ့် (Collins et al ။ , 2007) ။ ဤရွေ့ကားစုပေါင်းရလဒ်များကိုထိုကဲ့သို့သောအီစရိုဂျင်နှင့်အဓိကချို့ယွင်းအဖြစ် neuroactive steroids သည်, ဇီဝြဖစ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဆင့်နှင့်အစောပိုင်းစိတ်ဒဏ်ရာ: တုံးစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုဝတ္ထုများ၏အစောပိုင်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးခန့်မှန်းကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ (ရှိပါသည်အီဗန် et al ။ , 2012; Huizink et al ။ , 2006), နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတစ်တုံး cortisol တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုရန်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်းLovallo, 2006) ။ သို့သော်ဤတုံ့ပြန်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်၎င်း, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသောအရာကိုကာလမှာပိုမိုဆိုးရွားလာလျှင်မသိရသေးဖြစ်ပါတယ်မှာ-အန္တရာယ်တစ်ဦးချင်းစီအများဆုံးအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ အစောပိုင်းဘဝဒုက္ခမှ exposure အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုး (အပေါ်သက်ရောက်မှုလူသိများခဲ့ပါသည်Lovallo, 2013) နှင့်ထိုအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌စွဲလမ်းမမှန်ဖွံ့ဖြိုးမညျဖွစျကွောငျးဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွါး (Doan et al ။ , 2014; မြင် ဧနောက်, 2011 ပြန်လည်သုံးသပ်သည် ဖြစ်. , Gerra et al ။ , 2014) ။ ငယ်ဘဝဒုက္ခအပြုသဘောပါ (ventral striatum အတွက်စိတ်ကြွဆေးမှ dopamine တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Oswald et al ။ , 2014) နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်ကုသမှုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် limbic ဒေသများတွင်အောက်ပိုင်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှင့်လည်းပြန်သွားကြသည်ဖို့တိုတောင်းအချိန်ဟောကိန်းထုတ်, မသက်ဆိုင်မူးယစ်ဆေးအမျိုးအစား၏ (ဗန်ဆည် et al ။ , 2014) ။ ဒီတုံ့ပြန်ချက်ကိုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခံခဲ့ရလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ရန်မကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုရှိခဲ့ပေမယ့်ကင်း-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စောစောဘဝဒုက္ခ (စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ cortisol တုံ့ပြန်မှုတိုးလာFlanagan et al ။ , 2015) ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုအစောပိုင်းဘဝဒုက္ခတစ်ဦးဖိအားစိတ်ဖိစီးမှု system ကိုတုန့်ပြန် (အပေါ်ဆုတ်ခွာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတည်းဖြတ်တွေ့ရှိခဲ့al'Absi et al ။ , 2018) ။ သို့သော်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်စနစ်တကျသည်ဤအသင်းအဖွဲ့များစုံစမ်းပြီ, ပင်နည်းပါးလာနေဆဲမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန်အစောပိုင်းဘဝဒုက္ခ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ကြပါပြီ။
5 ။ ကောက်ချက်နှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်
psychoactive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုဟာအရံစိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်းအပေါ်သိသိသာသာစူးရှသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ စူးရှသောမူးယစ်ဆေး-related ပုဂ္ဂလဒိဋ္, neuroendocrine နှင့်ဇီဝကမ္မပြည်နယ်များပြောင်းလဲပစ်ရန်ဗဟိုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းပေါ်ဤအကြောင်းသက်ရောက်မှုအပြိုင်မူးယစ်ဆေး-related ဆိုးကျိုးများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ပုံမှန်, မြင့်မားစိတ်ဖိစီးမှုပြောင်းလဲနှင့်နှစ်ဦးစလုံးလုပ်သူများနှင့် phasic တုံ့ပြန်များနှင့်မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များအတွက်တုံ့ပြန်မှုဆုချထိုကဲ့သို့သောပွောငျးလဲသိသိသာသာသည်းခံစိတ်, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသက်ရောက်မှုအဖြစ်လက်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အနာဂတ် relapse ခန့်မှန်းအတွက်နဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုစွဲလမ်းတ္ထုများ, လုပ်ဆောင်ချက် neurobiological ပစ်မှတ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားပေမယ့်, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, တဏှာ, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးမှုကိုထိခိုက်ရန်, စိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်းအပေါ်သိသိသာသာများနှင့်အစွမ်းထက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းအလားတူဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
သို့ရာတွင်ထိုသို့အနာဂတ်သုတေသနအတွက်လက်ရှိစာပေနှင့်အရေးကြီးသောဒေသများထံမှကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်အရာကိုန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်သတိပြုရပါမည်။ ဒီနေရာမှာဆွေးနွေးတင်ပြအများစုမှာလေ့လာမှုများလုံးဝရင်တော့မှားမယ်သင်တန်းသားများ / အလင်းအသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ်မှီခို / နာတာရှည်အသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်စေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပြီ သာအနည်းငယ်အသုံးပြုသူကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ပါပွီ။ ဝတ္ထုများကိုဖြတ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြသောသူတို့အဘို့, နာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ (၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် activation တစ်တုံးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Holdstock et al ။ , 2000; ရှငျဘုရငျ et al ။ , 2006; Stormark et al ။ , 1998; ယော et al ။ , 2006); သို့သော်ဒီအပြည့်အဝအများအပြားမူးယစ်ဆေးအတွက် elucidated နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများအလင်းအသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကပိုသုတေသနအပြည့်အဝမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးမှပေါ်ပေါက်သော neuroadaptations နားလည်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ထို့အပြင်အများဆုံးလေ့လာမှုများကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှနာတာရှည်ပစ္စည်းဥစ္စာသည်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုနှိုင်းယှဉ် Cross-Section ဖြစ်ကြသည်။ မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူစိတ်ဖိစီးမှု dysregulation တ္ထုများမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားသို့မဟုတ်အနာဂတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသူတို့ကို predisposes လျှင်ထို့ကွောငျ့ဆုံးဖြတ်သည်မရနိုင်ပါ။ ဒါဟာသက်ရောက်မှုများ၏ညှိနှိုင်းကြောင်း, အမှန်တကယ်အလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပြီး, ။ အလှည့်အတွက်နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုတုန့်ပြန် dysregulates ထားတဲ့အစောပိုင်းစိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်မိသားစုသမိုင်းကြောင့်တစ်ဦးနှောင့်အယှက်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစားဖို့ပိုများပါတယ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ။ ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်သိမှုဖွံ့ဖြိုးရေး (ABCD) လေ့လာမှုသောအကြီးအကျယ်ခံဝန်အဖြစ် longitudinal သုတေသန, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုစနစ်ကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အတွက်ဆိုပါကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရလဒ်များကိုအဆုံးအဖြတ်များအတွက်အရေးကွီးသို့မဟုတျ Pre-ရှိပြီးသားစိတ်ဖိစီးမှု dysregulation ပိုမိုဆိုးရွားစေကြောင်း။ Chaplin နဲ့ဒီအထူးကိစ္စများတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု dysregulation အကြား link ကို၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်တစ်ခုဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များတွင်ဤယာယီအသင်းအဖွဲ့များဖြေရှင်းရန်။
စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်တစ်ဦးစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သူတွေဟာအဆိုပါ spectrum ဒါမှမဟုတ်အခြားတစ်ဦးအဆုံးအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့စွဲလမ်းတ္ထုများဖို့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန် neuroadaptations အပြည့်အဝ spectrum ကိုဖမ်းယူမည်မဟုတ်ပါ။ opiates တွင်တွေ့မြင်ကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်တချို့အတိုင်းအတာအထိမော်ဒယ်များဒီစဉ်ဆက်ဖြေရှင်းနိုင်ပေမယ်, (Armario, 2010), မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုဖို့စိတ်ဖိစီးမှု system ကိုတုန့်ပြန်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားအကြားကွဲပြားနိုင်သည်။ တစ်ဦးကအနာဂတ်ပြန်လည်သုံးသပ်မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတွေ့ရှိချက် synthesize သငျ့သညျ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ပွီအချို့သောအရာအချို့တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု, ဤစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်တိုးတက်မှုအလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နှေးကွေးစေနိုင်သည်။
စာပေထဲမှာကွာဟချက်နေသော်လည်းဤတွေ့ရှိချက်များစုပေါင်းစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏ dysregulation ကာကွယ်တားဆီးရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်ကုထုံးကြားဝင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ပစ်မှတ် (များအတွက်အလားအလာအမှတ်အသားများအဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုGreenwald, 2018; Milivojevic နှင့် Sinha, 2018) ။ စိတ်ဖိစီးမှုသည့်စနစ် (ဥပမာအစောပိုင်းဘဝဒုက္ခ, မျိုးဗီဇ, မိသားစုသမိုင်း) impact သိအချို့အန္တရာယ်အချက်များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီပစ်မှတ်ထားကြောင်းကာကွယ်တားဆီးရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည်ဤလူတစ်ဦးချင်းစီဟာပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်ကိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့ကျစေနိုင်တယ်။ စွဲလမ်းမမှန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အကုသမှုအားထုတ်မှုကိုရည်မှတ်ခြင်း, extant ကုသမှာအကောင်းဆုံးကြိုးနှံစှာထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ adrenergic system ကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်း pharmacological ကြားဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့် evoked တဏှာကိုလျော့ချစေခြင်းငှါပဏာမသက်သေအထောက်အထား (ရှိပါသည်Fox ကနှင့် Sinha, 2014; Fox က et al ။ , 2012; Le et al ။ , 2011; Milivojevic နှင့် Sinha, 2018) ။ စိတ်ဖိစီးမှု-related တဏှာ၏စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းရန်ကြောင်းအမူအကျင့်ကုသမှုတည်ဆဲကုသမှု၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဘူး။ ထို့ကြောင့် dysregulated စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်သောတိကျ biomarkers ကျွန်တော်တို့ကိုဝတ္ထုကုသမှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုစေခြင်းငှါ, ဖော်ထုတ်စွဲကုသမှုအားထုတ်မှုတိုးတက်လာဖို့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏ပုံမှန်ပစ်မှတ်ထားချဉ်းကပ်။
ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေးထောက်ပံ့ငွေနံပါတ်များကိုအမျိုးသား Institutes ထံမှထောက်ပံ့ငွေ, R01-AA013892, R01-AA020504, PL1-DA024859 နှင့် T32-DA007238 ကထောက်ခံခဲ့သည်။
ထိုးအပေါ်မှီခို, ဖိအားနှင့်ကနဦး reactivity ကို: Acri JB နီကိုတင်းကြွက်များတွင် acoustic ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ modulates ။ Psychopharmacology (Berl) 1994;116: 255-265 ။ Doi: 10.1007 / BF02245326 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Adinoff ခ, Risher-ပန်းပွင့်ဃ, De Jong ဂျေ, Ravitz ခ, အရိုး GHA, Nutt DJ သမား, Roehrich အယ်လ်မာတင် PR စနစ်, hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးလည်ပတ်၏ Linnoila အမ်နှောက်ယှက်ခြောက်လအမျိုးသားများတွင်အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်က ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991;148: 1023-1025 ။ Doi: 10.1176 / ajp.148.8.1023 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Adinoff ခ, Ruether K. , Krebaum အက်စ်, Iranmanesh အေ, Williams က MJ ယောက်ျားတစ်ဦးသဘာဝလက်တွေ့နမူနာများတွင်နာတာရှည်အရက်မူးယစ်နေစဉ်အတွင်းတံထွေး cortisol ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2003;27: 1420-1427 ။ Doi: 10.1097 / 01.ALC.0000087581.13912.64 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းအတွက်အန္တရာယ်အတွက် al'Absi M. Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical တုံ့ပြန်မှုများ။ int ။ ဂျေ Psychophysiol ။ 2006;59: 218-227 ။ Doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2005.10.010 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
al'Absi အမ်၊ နီကိုဂျီအမ်၊ Lemieux အေနီကိုတင်းထွက်ခွာစဉ်အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အစောပိုင်းဘဝအခက်အခဲများ၏သက်ရောက်မှု။ Psychoneuroendocrinology ။ 2018;98: 108-118 ။ Doi: 10.1016 / J.PSYNEUEN.2018.08.022 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Allen က CD ကို, Rivier CL, Lee က SY ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အရက်ထိတွေ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိဖို့လူသိများဗဟိုဦးနှောက်ဆားကစ်ပွောငျးလဲ။ neuroscience ။ 2011;182: 162-168 ။ Doi: 10.1016 / J.NEUROSCIENCE.2011.03.003 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
မတူညီတဲ့လမ်းကြောင်း, ဘုံရလဒ်ကို: စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏ Armario အေ Activation ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol ။ သိပ္ပံ။ 2010 Doi: 10.1016 / j.tips.2010.04.005 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Ashare RL, Sinha R. , Lampert R. , Weinberger AH, Anderson က GM က, Lavery ME, Yanagisawa K. , McKee လုပ် SA တုံး vagal reactivity ကိုစိတ်ဖိစီးမှု-precipitated ဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 2012;220:259–268. doi: 10.1007/s00213-011-2473-3. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Barrett SP, Tichauer အမ်, Leyton အမ်, Pihl ro နီကိုတင်းသည် non-မှီခိုအထီးဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးပွားစေပါသည်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2006;81: 197-204 ။ Doi: 10.1016 / J.DRUGALCDEP.2005.06.009 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Barutcu ဗြဲ, Esen လေး, Kaya ဃ, တခ်မငျအမ်, Karakaya O. , Melek အမ်, Esen OB, Basaran Y. ဆေးလိပ်ဆေးလိပ်နှင့်နှလုံးရောဂါနှုန်း variable: Parasympathetic နှင့်စာနာတော့ဘဲ၏ Dynamic သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အမ်း။ Noninvasive Electrocardiol ။ 2005;10: 324-329 ။ Doi: 10.1111 / j.1542-474X.2005.00636.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
က Man အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာခံတွင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်-9-Tetrahydrocannabinol အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အင်ဆူလင်-သွေးဆောင် Hypoglycemia မှ Benowitz NL, ဂျုံးစ် RT ကို, ကြီးထွားဟော်မုန်းတွေနဲ့ cortisol တုံ့ပြန်မှု၏ Lerner သမဝါယမစီးပွားပျက်ကပ်။ ဂျေ Clin ။ Endocrinol ။ Metab ။ 1976;42: 938-941 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Bernardin အက်ဖ်, Maheut-Bosser အေ, အရက်-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် Paille အက်ဖ်သိမှုချို့ယွင်း။ တပ်ဦး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014 Doi: 10.3389 / fpsyt.2014.00078 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
တစ်ဦးက Multifactorial အမြင်: Besson အမ်, ခသိမှုအလုပ်မဖြစ်, ကိုထိခိုက်အမေရိကန်, နှင့်နီကိုတင်းစွဲလမ်းဖို့အားနည်းမေ့လိုက်ပါ။ တပ်ဦး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2016;7: 160 ။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2016.00160 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Bitmead RR, န့်အသတ်မှီခိုထည့်သွင်းမှုများနှင့်အတူ LMS အလိုက်ခန့်မှန်းချက်များ Bitmead RR Convergence Properties ကို။ ကို IEEE ဖြတ်ကျော်။ အလိုအလျှောက်။ Contr ။ 1984;29: 477-479 ။ Doi: 10.1016 / j.drugalcdep.2009.02.004 ။ [CrossRef] [Google Scholar]
လိန်း SK ကို, Sinha R. အရက်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် glucocorticoids: အန္တရာယ်ကနေအရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက်မှီခိုနှင့် relapse ရန်။ Neuropharmacology ။ 2017;122: 136-147 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2017.01.037 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
လိန်း SK ကို, Nautiyal N. , ဟတ် R. , Guarnaccia JB, Sinha R. တဏှာ, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အရက် cue အခင်းအကျင်းများနှင့်မူးရူးနှင့် Non-မူးရူးသောက်အတွက် discrete တွေကိုမှ cortisol နှင့်အမူအကျင့်အရက်လှုံ့ဆျောမှုတုံ့ပြန်မှု။ စှဲလမျးသူ။ Biol ။ 2018 Doi: 10.1111 / adb.12665 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Booij L. , Welfeld K. , Leyton အမ်, Dagher အေ, Boileau ဗြဲ, Sibon ဗြဲ, Baker GB ကို, Diksic အမ်, Soucy JP, Pruessner JC, Cawley-Fiset အီး, Casey KF, Benkelfat C. Dopamine ကျန်းမာအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအကြားလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ။ ဘာသာပြန်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2016;6 Doi: 10.1038 / tp.2016.6 ။ e740 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Borg အက်စ်, Kvande အိပ်ချ်, စွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်အရက်မူးယစ်စဉ်အတွင်း Sedvall G. အဗဟို norepinephrine ဇီဝြဖစ်။ သိပ္ပံ။ 1981;213: 1135-1137 ။ Doi: 10.1126 / SCIENCE.7268421 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Borowsky ခ, ကိုကင်း-သွေးဆောင် hypothalamo-pituitary-adrenal activation ၏ Kuhn CM Monoamine ဖျန်ဖြေခြင်း။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ ကုထုံး။ 1991;256: 204-210 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Brady je, အရက်ထဲမှာလီ G. အ Trends နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သေဆုံးသူများဒဏ်ရာရသူ drivers တွေကိုတွေ့ရှိအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ, 1999-2010 ။ နံနက်။ ဂျေ Epidemiol ။ 2014;179: 692-699 ။ Doi: 10.1093 / aje / kwt327 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဘာကင်ဟမ်ဂျေ, အ Rat အတွက် Hypothalamo-Pituitary-Adrenocortical လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် Naloxone ၏ Cooper က TA အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuroendocrinology ။ 1986;42: 421-426 ။ [PubMed] [Google Scholar]
ပလာစမာ cortisol ၏ Buydens-Branchey L. , Branchey အမ်, Hudson ဂျေ, Dorota Majewska အမ်ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနှင့် DHEA-S ကကိုကင်းစွဲထဲမှာကိုကင်းသုံးစွဲမှုပြတ်တောက်အောက်ပါ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002;27: 83-97 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Cami ဂျေ, Gilabert အမ်, စန်းအယ်လ်, de la Torre R. Hypercortisolism ဘိန်းဖြူစွဲ၏လျင်မြန်သော detoxification အတွက် opioid ပြတ်တောက်ပြီးနောက်။ br ။ ဂျေစွဲ။ 1992;87: 1145-1151 ။ Doi: 10.1111 / j.1360-0443.1992.tb02001.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ကာရိုးဃ, Ginty ကို AT, Whittaker AC အ, Lovallo WR, က de Rooij SR, Rooij က de ။ ခေါင်းစဉ်: တုံးနှလုံးသွေးကြောနဲ့ Cortisol တုံ့ပြန်မှု၏, အမူအကျင့်သိမြင်မှုနှင့်အာရုံကြောစောဒနာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု acute ရန်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2017 Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2017.02.025 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Carson DS, Bosanquet DP, Carter က CS, Pournajafi-Nazarloo အိပ်ချ်, Blaszczynski အေ, လို့ McGregor စိတ်ကြွဆေး polydrug အသုံးပြုသူတစ်ဦး Naturalist နမူနာများတွင်လျှော့ချ Basal cortisol များအတွက်ပဏာမသက်သေအထောက်အထား IS ။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2012;20: 497-503 ။ Doi: 10.1037 / a0029976 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Chen အိပ်ချ်၊ Fu Y. ၊ Sharp BM နာတာရှည်နီကိုတင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှုသည်ပြင်းထန်သောစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal တုန့်ပြန်မှုများကိုတိုးပွားစေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33: 721-730 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301466 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ကလေးကအီး, Dlugos အေ, De ကျေးအိပ်ချ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ, ဟော်မုန်းများနှင့်လိင်နှင့်ရာသီစက်ဝန်းအဆင့် ဆက်စပ်. အတွက် TSST မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ Psychophysiology ။ 2010;47:550–559. doi: 10.1111/j.1469-8986.2009.00961.x. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင်စူးရှသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စူးရှသောသွေးကြောသွင်းအရက်တို့အကြား Childs E. , O'Connor အက်စ်၊ de Wit အိပ်ချ်။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2011;35:1794–1803. doi: 10.1111/j.1530-0277.2011.01522.x. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ကလေးကအီး, Lutz ဂျာစူးရှသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအပေါ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်-9-THC ၏က de ကျေးအိပ်ချ်ဆေးသောက်ရန်-related ဆိုးကျိုးများ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2017;177: 136-144 ။ Doi: 10.1016 / J.DRUGALCDEP.2017.03.030 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Chiueh CC ကို, unanesthetized ကြွက်များ၏ sympathoadrenal medullary system ထဲကနေ endogenous epinephrine နှင့် norepinephrine ၏ကင်းခြင်းဖြင့် Kopin IJ အလယ်ပိုင်းကမကထပြုခဲ့လွှတ်ပေးရန်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ ကုထုံး။ 1978;205: 148-154 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Cohen LM, al'Absi အမ်၊ Collins FL၊ ဂျူနီယာတံတွေး cortisol ပြင်းအားများသည်နီကိုတင်းဓာတ်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2004;29: 1673-1678 ။ Doi: 10.1016 / j.addbeh.2004.02.059 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Collins SL, အီဗန်သည် SM, Foltin RW လူသားများအတွက် Haney အမ် Intranasal ကင်း: လိင်နှင့်ရာသီစက်ဝန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 2007;86: 117-124 ။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2006.12.015 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Cone EJ, ဂျွန်ဆင် RE, Moore က JD, Roache JD ထူးခြားသောဟော်မုန်း, ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆိုးကျိုးများနှင့်အထီးလူ့ဘာသာရပ်များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ဆေးလိပ်သောက်ဆေးခြောက်ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1986;24:1749–1754. doi: 10.1016/0091-3057(86)90515-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ကော့ SML, Benkelfat C. , Dagher အေ, အန်တိုနီ JS, Durand အက်ဖ်, McKenzie လုပ် SA, Kolivakis တီ, Casey KF, Leyton အမ် Striatal Dopamine လူသားတွေဟာအတွက် Intranasal ကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်ချက်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009;65: 846-850 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2009.01.021 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Cuttler C. , Spradlin အေ, Nusbaum ကို AT, Whitney P. , Hinson JM, McLaughlin RJ နာတာရှည်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ Psychopharmacology (Berl) 2017;234: 2299-2309 ။ Doi: 10.1007 / s00213-017-4648-z ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
D'Souza DC၊ Perry E. , MacDougall L. , Ammerman Y. , Cooper T. , Wu Y. , Braley G. , Gueorguieva R. , Krystal JH Healthy Individuals အတွင်းသွေးကြောသွင်းခြင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ် Delta-9-Tetrahydrocannabinol ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု - အကျိုးသက်ရောက်မှုများ စိတ္တဇအတွက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2004;29: 1558-1572 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300496 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
D'Souza DC၊ Ranganathan အမ်၊ Braley G. ၊ Gueorguieva R. , Zimolo Z. , Cooper T. , Perry E. , Krystal J. သည် ot-9-Tetrahydrocannabinol ၏ C-XNUMX-Tetrahydrocannabinol ၏မုန်းတီးမှုနှင့် Amnestic Effects ကိုဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုများတွင်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33: 2505-2516 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301643 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
က de ကျေးအိပ်ချ်, Vicini L. , ကလေးအီး, Sayla MA, Terner ဂျေစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ဆေးလိပ်သောက်တိုးတက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းသလား တစ်ဦးကပဏာမလေ့လာမှု။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 2007;86: 312-319 ။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2006.07.001 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Delitala G. အ, မမေ့ဘူးအေ, anterior pituitary ဟော်မုန်း Secret အပေါ် opiate peptides နှင့် alkaloids ၏ Besser အမ် Differential ဆိုးကျိုးများ။ Neuroendocrinology ။ 1983;37: 275-279 ။ Doi: 10.1159 / 000123558 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
DeVito EE, Herman AI အ, ရေ AJ, ချစ်သူများနေ့ GW, Sofuoglu အမ်ဘာသာရပ်, ဇီဝနှင့်သွေးကြောသွင်းနီကိုတင်းမှသိမှုတုံ့ပြန်ချက်: လိင်နှင့်ရာသီလာခြင်း Cycle အဆင့်သက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2014;39: 1431-1440 ။ Doi: 10.1038 / npp.2013.339 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Doan SN, Dich N. , အီဗန် GW ကလေးဘဝတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအန္တရာယ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် allostatic ဝန်: ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍ။ ကနျြးမာရေး Psychol ။ 2014;33: 1402-1409 ။ Doi: 10.1037 / a0034790 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Donnie EC, Caggiula AR, နှင်းဆီ C. , Jacobs KS, Mielke MM, ကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်မှု-ဆက်ပြောပါတယ်နှင့်တုန့်ပြန်-လွတ်လပ်သောနီကိုတင်း၏ Sved AF Differential ဆိုးကျိုးများ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 2000;402:231–240. doi: 10.1016/S0014-2999(00)00532-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
dos Santos RG, Valle အမ်, Bouso JC, Nomdedéu JF, Rodriguez-Espinosa ဂျေ, McIlhenny Eh, Barker လုပ် SA, Barbanoj MJ, RIBA ဂျေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, neuroendocrine နှင့် ayahuasca ၏ immunological သက်ရောက်မှု: D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ ဂျေ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2011;31:717–726. doi: 10.1097/JCP.0b013e31823607f6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Dumont GJ, Kramer C. , FC အသင်းသဖွယ်, Touw DJ သမား, ဗန် Hasselt JG, က de ကမ်းအမ်, ဗန် Gerven JM, Buitelaar JK, Verkes RJ ဆေးခြောက် Coadministration နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်လူသားများအတွက်အပူချိန်အပေါ် "Ecstasy" ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Potentiates ။ Clin ။ Pharmacol ။ Ther ။ 2009;86: 160-166 ။ Doi: 10.1038 / clpt.2009.62 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
diazepam, phenobarbital, ဒါမှမဟုတ် naloxone-precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ရုပ်သိမ်းရေးအပေါ်စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူနာတာရှည်ကုသမှု Eisenberg RM အကျိုးသက်ရောက်မှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1985;15: 375-381 ။ [PubMed] [Google Scholar]
ဧနောက်သည် M.-A. အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုများအတွက်ခန့်မှန်းအဖြစ်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Psychopharmacology (Berl) 2011;214:17–31. doi: 10.1007/s00213-010-1916-6. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Errico AL ဘုရင် AC အ, Lovallo WR, Abstinent အမျိုးသားအရက်ထဲမှာ Parsons oa cortisol Dysregulation နှင့်သိမှုချို့ယွင်း။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2002;26: 1198-1204 ။ Doi: 10.1111 / j.1530-0277.2002.tb02656.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
အစောပိုင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းအရက် Withdrawal စဉ်အတွင်း Beta ကို-နဲ့အတူ Endorphins, Adrenocorticotropic ဟော်မုန်းနှင့် cortisol ၏ Esel အီး Plasma Levels နဲ့။ အရက်အရက်။ 2001;36: 572-576 ။ Doi: 10.1093 / alcalc / 36.6.572 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
အီဗန်, Greaves-သခင်ဘုရားကေ, Euser AS, Franken IHA, Huizink AC အအရက်သေစာအသုံးပြုမှုစတင်ခြင်း၏ hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုနဲ့အသက်အရွယ်အကြားစပ်လျဉ်း BE ။ စွဲလမ်း။ 2012;107: 312-322 ။ Doi: 10.1111 / j.1360-0443.2011.03568.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Feller အက်စ်, Vigl အမ်, Bergmann MM, ဘိုးအင်းအိပ်ချ်, Kirschbaum C. , အဟောင်းတွေလူကြီးများအတွက်ဆံပင် cortisol ပြင်းအား၏ Stalder တီခန့်မှန်း။ Psychoneuroendocrinology ။ 2014;39: 132-140 ။ Doi: 10.1016 / j.psyneuen.2013.10.007 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Flanagan JC, Baker NL, McRae-Clark က AL, Brady KT, ဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံ Moran အဘိဓါန် Santa မာရီယာဟာ MM အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကင်းမှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြား intranasal oxytocin နှင့်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုအကြားအသင်းအဖွဲ့ပေါ်မှာ။ Psychiatric ။ res ။ 2015;229: 94-100 ။ Doi: 10.1016 / j.psychres.2015.07.064 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Foltin RW, Fischman မဂ္ဂါဝပ် intranasal ကိုကင်းများပေါင်းစပ်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ, နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးဖိအားအပေါ်ဆေးခြောက်များနှင့်တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်သောက်သည်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1990;36:311–315. doi: 10.1016/0091-3057(90)90409-B. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Foltin RW, Fischman မဂ္ဂါဝပ်, Pedroso JJ, Pearlson GD ဆေးခြောက်သုံးခြင်းနှင့်လူသားတွေအတွက်ကင်း interaction က: နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1987;28:459–464. doi: 10.1016/0091-3057(87)90506-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Foltin RW, Fischman မဂ္ဂါဝပ်, Pippen PA ဆိုပြီး, ကင်း၏ကယ်လီ TH အပြုအမူသက်ရောက်မှုတစ်ဦးတည်းနှင့်လူသားတွေအတွက်အီသနောသို့မဟုတ်ဆေးခြောက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1993;32:93–106. doi: 10.1016/0376-8716(93)80001-U. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Foltin RW, Fischman မဂ္ဂါဝပ်လူသားများအတွက်ကင်း၏ Levin FR နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု: ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1995;37:193–210. doi: 10.1016/0376-8716(94)01085-Y. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Foltin RW, ရပ်ကွက် AS, Haney အမ်, ဟတ် CL, Collins က ED လူသားတွေအတွက်သောက်သည်ကိုကင်းများ၏ဆေးများမြင့်တက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2003;70:149–157. doi: 10.1016/S0376-8716(02)00343-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Foulds ဂျေ, Stapleton ဂျာဘဲလ် N. , Swettenham ဂျေ, Jarvis MJ, စယ် mAh Mood နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်-ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်အရေပြားအောက်ဆုံးနီကိုတင်း၏ဇီဝကမ္မဆိုးကျိုးများ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1997;44:105–115. doi: 10.1016/S0376-8716(96)01327-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Fox ကအိပ်ချ်, Sinha R. ကင်း-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-related pathophysiology ဖြေရှင်းရန်တစ်ဦးကုထုံးအေးဂျင့်အဖြစ် guanfacine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Adv ။ Pharmacol ။ 2014;69:218–265. doi: 10.1016/B978-0-12-420118-7.00006-8. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Fox က HC, Anderson က GM က, Tuit K. , Hansen ဂျေ, Kimmerling အေ, Siedlarz KM, မော်ဂန် PT, Sinha R. Prazosin အရက်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် stress- နှင့် cue-သွေးဆောင်တဏှာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှု: ပဏာမတွေ့ရှိချက်။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2012;36:351–360. doi: 10.1111/j.1530-0277.2011.01628.x. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဆေးခြောက်မှီခိုနှင့်ဆက်စပ် Fox က HC, Tuit KL, Sinha R. စိတ်ဖိစီးမှုသည့်စနစ်ပြောင်းလဲမှုများကိုအရက်နှင့်ကင်းဘို့တဏှာကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ Hum ။ Psychopharmacol ။ Clin ။ Exp ။ 2013;28: 40-53 ။ Doi: 10.1002 / hup.2280 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဖရက်ဒရစ် SL, Reus VI ကို, Ginsberg ဃ, ခန်းမသည် SM, Munoz RF, Ellman G. အ cortisol နှင့်ခန့်မှန်းသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် abstinence အောင်မြင်မှုအဖြစ် dexamethasone တုံ့ပြန်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998;43:525–530. doi: 10.1016/S0006-3223(97)00423-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Frias ဂျေ, Rodriguez R. , တောရက်စ် JM, Ruiz အီး, pituitary-gonadal ဝင်ရိုးဟော်မုန်းအပေါ်စူးရှသောအရက်မူးယစ်၏ Ortega အီးအကျိုးသက်ရောက်မှု, pituitary-adrenal ဝင်ရိုးဟော်မုန်းနှစ်ခုစလုံးလေ့လာခြင်းလူ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်β-နဲ့အတူ Endorphins နှင့် prolactin ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 2000;67:1081–1086. doi: 10.1016/S0024-3205(00)00702-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဖူ Y. , Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ, ချစ်သူများနေ့ JD, အ Rat Paraventricular နျူကလိယအတွက် Sharp က BM Adrenocorticotropin တုံ့ပြန်မှုများနှင့်နီကိုတင်း-သွေးဆောင် Norepinephrine Secret Brainstem receptor မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့နေ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1997;138: 1935-1943 ။ Doi: 10.1210 / endo.138.5.5122 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဂျော့ခ်ျ JM, Reier အီး, Lanese RR, Rower JM မော်ဖင်းအကိုက်မေ့ဆေးလုပ်ကွက် cortisol နှင့်ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုလူသားတွေဟာအတွက်ခွဲစိတ်စိတ်ဖိစီးမှုရန်။ ဂျေ Clin ။ Endocrinol ။ Metab ။ 1974;38: 736-741 ။ Doi: 10.1210 / jcem-38-5-736 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Gerra G. အ, Ceresini အက်စ်, Esposito အေ, Zaimovic အေ, Moi G. အ, Bussandri အမ်, Raggi MA, Molina အီး Neuroendocrine နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု opioid အဲဒီ receptor-ရန်မှဘိန်းဖြူ detoxification စဉ်အတွင်း: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်အတူဆက်ဆံရေး။ int ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2003;18: 261-269 ။ Doi: 10.1097 / 00004850-200309000-00002 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Gerra G. အ, Somaini L. , Manfredini အမ်, Raggi MA, Saracino MA, Amore အမ်, Leonardi C. , Cortese အီး, Donnini C. Dysregulated abstinent ဘိန်းဖြူအသုံးပြုသူများသည်ကြားတွင်စိတ်ခံစားမှုမှတုံ့ပြန်မှု: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလျစ်လျူရှုနှင့်အတူညမညသဘောတရားနှင့်စွဲပြင်းထန်မှု☆ prog ။ Neuro-Psychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014;48: 220-228 ။ Doi: 10.1016 / j.pnpbp.2013.10.011 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Gianoulakis C. , Krishnan ခ, Thavundayil ဂျေအရက်၏အမြင့်အန္တရာယ်မှာဘာသာရပ်များအတွက်အီသနောမှ Pituitary βEndorphin၏အာရုံ Enhanced ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatric ။ 1996;53: 250 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.1996.01830030072011 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဇီဝဆဲပါအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်: စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်တံ့သောအကျိုးကိုထောက်တုံးတုံ့ပြန်မှုကို AT Ginty? int ။ ဂျေ Psychophysiol ။ 2013;90: 90-94 ။ Doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2013.06.008 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
စတိန်း RZ, Volkow အဲန်ဒီမူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက် neuroimaging သက်သေအထောက်အထား။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;159: 1642-1652 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.159.10.1642 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Gourlay စင်ကာပူဒေါ်လာ, ပလာစမာနီကိုတင်းနှင့် catecholamines ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆေးလိပ်, နီကိုတင်းနှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားများနှင့်သွေးကြောသွင်းနီကိုတင်းပြီးနောက်ဆက်စပ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများအတွက် Benowitz NL Arteriovenous ကွဲပြားခြားနားမှု။ Clin ။ Pharmacol ။ Ther ။ 1997;62:453–463. doi: 10.1016/S0009-9236(97)90124-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
စွဲကုသမှုများအတွက် Greenwald MK Anti-စိတ်ဖိစီးမှု neuropharmacological ယန္တရားများနှင့်ပစ်မှတ်: ဘာသာမူဘောင်။ Neurobiol ။ စိတ်ဖိစီးမှု။ 2018;9: 84-104 ။ Doi: 10.1016 / J.YNSTR.2018.08.003 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
မမေ့ဘူးအေ, moult PJA, Cunnah ဃ, Besser အမ်အမျိုးမျိုး opioid ယန္တရားများ ACTH နှင့်လူ gonadotrophin လွှတ်ရာမော်ဂျူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ Neuroendocrinology ။ 1986;42: 357-360 ။ Doi: 10.1159 / 000124463 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Grunberg NE, Popp Ka, Bowen တို့ DJ သမား, Nespor သည် SM, Winders SE, အင်ဆူလင်, ဂလူးကို့စ, epinephrine နှင့် norepinephrine အပေါ်နာတာရှည်နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေး Eury အရှေ့တောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1988;42: 161-170 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Halbreich U. , Sachar EJ, Asnis GM က, နေသန် RS, Halpern ပုံမှန်ဘာသာရပ်များအတွက် dextroamphetamine မှ Diurnal cortisol တုံ့ပြန်မှု FS ။ Psychoneuroendocrinology ။ 1981;6:223–229. doi: 10.1016/0306-4530(81)90031-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Hamidovic အေ, ကလေးအီး, Conrad အမ်ဘုရင်အေ, ခံစားချက်နဲ့ Cortisol လွှတ်ပေးရန်အတွက်က de ကျေးအိပ်ချ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုစိတ်ကြွဆေး၏ခံစားချက်သက်ရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2010;109: 175-180 ။ Doi: 10.1016 / j.drugalcdep.2009.12.029 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Haney အမ်, ရပ်ကွက် AS, Gerra G. အလူသားများအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲသောက်သည်ကိုကင်းအောက်ပါဃ-fenfluramine နှင့် bromocriptine ၏ Foltin RW Neuroendocrine ဆိုးကျိုးများ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2001;64:63–73. doi: 10.1016/S0376-8716(00)00232-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Haney အမ်, Malcolm RJ, Babalonis အက်စ်, Nuzzo PA ဆိုပြီး, Cooper က ZD, Bedi G. အ, Grey က KM, McRae-Clark ကအေ, Lofwall MR, Sparenborg အက်စ်, Walsh SL ခံတွင်း Cannabidiol, ဘာသာရပ် ALTER အားဖြည့်သို့မဟုတ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပါဘူး မီးခိုးဆေးခြောက်၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2016;41: 1974-1982 ။ Doi: 10.1038 / npp.2015.367 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Haney အမ်, Cooper က ZD, Bedi G. အ, Herrmann အီး, နေရဆဲ SD, ရိဒ် SC, Foltin RW, Levin FR Guanfacine နေ့စဉ်ဆေးခြောက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆေးခြောက်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေလျော့နည်းစေပါသည်။ စှဲလမျးသူ။ Biol ။ 2018 Doi: 10.1111 / adb.12621 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Harris က DS, Reus VI ကို, Wolkowitz OM, Mendelson je, ဂျုံးစ် RT ကို cortisol level ကိုပြောင်းလဲလူသားတွေအတွက်စိတ်ကြွဆေး၏ပျြောမှေ့စဆိုးကျိုးများမပြောင်းပါဘူး။ Neuropsychopharmacology ။ 2003;28: 1677-1684 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300223 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Harris က DS, Reus VI ကို, Wolkowitz O. , ယာကုပ် P. , 3rd, Everhart ET, Wilson ကအမ်, Mendelson je, စိတ်ကြွဆေးမှဂျုံးစ် RT ကို catecholamines တုံ့ပြန်မှု glucocorticoid အဆင့်ဆင့်မှဆက်စပ်ပေမယ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှု pleasurable ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ Pharmacopsychiatry ။ 2006;39: 100-108 ။ Doi: 10.1055 / s ကို-2006-941483 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Hawley RJ, Nemeroff သမဝါယမ, Bissette G. အ, Guidotti အေ, ရောလ် R. , ပြင်းထန်သောအရက် Withdrawal ကာလအတွင်းစာနာ Activation ၏ Linnoila အမ် Neurochemical Correlate ။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 1994;18: 1312-1316 ။ Doi: 10.1111 / j.1530-0277.1994.tb01429.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Heesch CM, Negus BH, Snyder RW, Eichhorn EJ, Keffer JH, လူသားတွေဟာအတွက် cortisol လျှို့ဝှက်ချက်ပေါ်ကင်း၏ Risser RC အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နံနက်။ ဂျေ Med ။ သိပ္ပံ။ 1995;310: 61-64 ။ Doi: 10.1097 / 00000441-199508000-00004 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဟင်နရီ BL, Minassian အေ, နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအပေါ်စိတ်ကြွဆေးမှီခို၏ပယ်ရီဒဗလျူ Effect ။ စှဲလမျးသူ။ Biol ။ 2012;17:648–658. doi: 10.1111/j.1369-1600.2010.00270.x. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဟေးလ် P. , Wynder EL ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ။ အဆိုပါသွေးရည်ကြည် epinephrine နှင့် corticoids အပေါ်နီကိုတင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နံနက်။ နှလုံးဂျေ 1974;87:491–496. doi: 10.1016/0002-8703(74)90174-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဟော့ဖ်မန်း WE, မက်ဒေါ်နယ်တီ, Berkowitz R. တစ်ပြိုင်နက် opiate detoxification စဉ်အတွင်းအသက်ရှူနှင့်စာနာ function ကိုအတွက်တိုးပွားစေပါသည်။ ဂျေ Neurosurg ။ Anesthesiol ။ 1998;10: 205-210 ။ Doi: 10.1097 / 00008506-199810000-00001 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Holdstock အယ်လ်ဘုရင် AC အ, ကျေးအိပ်ချ်, De ကျေးအိပ်ချ် / အလယ်အလတ်အကြီးစားနဲ့အလင်းလူမှုရေးသောက်ထဲမှာအီသနောကျအောကျခံနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တုံ့ပြန်မှု။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2000;24: 789-794 ။ Doi: 10.1111 / j.1530-0277.2000.tb02057.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Hollister LE, Moore ကအက်ဖ်, Kanter အက်စ်, Noble အီးΔ1-Tetrahydrocannabinol, လူကိုနှုတ်အုပ်ချုပ် synhexyl နှင့်ဆေးခြောက်ထုတ်ယူ: catecholamines မစင်, ပလာစမာ cortisol ပမာဏနှင့် platelet serotonin အကြောင်းအရာ။ Psychopharmacologia ။ 1970;17: 354-360 ။ Doi: 10.1007 / BF00404241 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Howes LG က, ပလာစမာအခမဲ့ 3,4-dihydroxyphenylethylene glycol နှင့် noradrenaline အဆင့်ဆင့်အတွက်ရိဒ် JL အပြောင်းအလဲများစူးရှသောအရက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်။ Clin ။ သိပ္ပံ။ (Lond ။ ) 1985;69: 423-428 ။ Doi: 10.1042 / cs0690423 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Huizink AC အ, ဖာဒီနန် RF, Ormel ဂျေ, Verhulst FC အသင်း Hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်း။ စွဲလမ်း။ 2006;101: 1581-1588 ။ Doi: 10.1111 / j.1360-0443.2006.01570.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Inder WJ, Joyce PR, Ellis MJ, Evans MJ, Livesey JH, Donald RA hypothalamic - pituitary - adrenal ဝင်ရိုးအပေါ်အရက်သောက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - endogenous opioid peptides နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ Clin ။ Endocrinol ။ 1995;43(3): 283-290 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Jacobs ဃ, Silverstone တီ, Rees အယ်လ်ပုံမှန်ဘာသာရပ်များအတွက်ပါးစပ် dextroamphetamine ရန် neuroendrocrine တုံ့ပြန်မှု။ int ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 1989;4: 135-147 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Jayaram-Lindströ N. , Konstenius အမ်, Eksborg အက်စ်, Beck O. , Hammarberg အေ, Franck ဂျေ Naltrexone ဖက်တမင်းဆေးပြားမူတည်နှင့်အတူလူနာအတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြားများ၏ဘာသာရပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု Attenuates ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33: 1856-1863 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301572 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
တရားမျှတရေး AJH, အမျိုးသမီးများအတွက်ရာသီစက်ဝန်း၏ follicular နှင့် luteal အဆင့်စဉ်အတွင်းဃ -amphetamine ၏က de ကျေးအိပ်ချ်ထူးခြားသောသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 1999;145: 67-75 ။ Doi: 10.1007 / s002130051033 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Karakaya O. , Barutcu ဗြဲ, Kaya ဃ, Esen လေး, Saglam အမ်, Melek အမ်, Onrat အီး, တခ်မငျအမ်, Esen OB, Kaymaz C. ထူးခြားသောနှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအပေါ်စီးကရက်ဆေးလိပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Angiology ။ 2007;58: 620-624 ။ Doi: 10.1177 / 0003319706294555 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ကနေဒီက AP, Epstein DH, Jobes ML, အာဂတျဃ, Tyburski အမ်, Phillips က ka, အလီ AA ကို, Bari က R. , Hossain က SM, Hovsepian K. , Rahman က MM, Ertin အီး, Kumar ကအက်စ်, Preston KL အဆက်မပြတ် in- နှလုံးခုန်နှုန်း၏-Field တိုင်းတာခြင်း: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ဆက်စပ်မှု, တဏှာ, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် polydrug အသုံးပြုသူများသည်အတွက်ခံစားချက်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2015;151: 159-166 ။ Doi: 10.1016 / j.drugalcdep.2015.03.024 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Kienbaum P. , Thurauf N. , မိုက်ကယ် MC, Scherbaum N. , Gastpar အမ်စူးရှသောအဘို့ Barbiturate-သွေးဆောင်မေ့ဆေးစဉ်အတွင်း Opioid-စွဲလူနာများအတွက် mu-Opioid receptor ပိတ်ဆို့ပြီးနောက် Plasma နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစိတ်ကြွဆေးအတွက် Epinephrine အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ပီတာဂျေလေးနက်တဲ့တိုးတက် Detoxification ။ မေ့ဆေးဗေဒ။ 1998;88 [PubMed] [Google Scholar]
ရှငျဘုရငျအေ, Munisamy G. အ, က de ကျေးအိပ်ချ်, မိုးသည်းထန်စွာလူမှုရေးသောက်များတွင်အရက်သေစာမှလင်းအက်စ် attenuation cortisol တုံ့ပြန်မှု။ int ။ ဂျေ Psychophysiol ။ 2006;59: 203-209 ။ Doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2005.10.008 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ရှငျဘုရငျထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Ernst တီ, Deng ဒဗလျူ, Stenger အေ, Gonzales RMK, Nakama အိပ်ချ်, နာတာရှည် Active ကိုဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများအတွက် Visuomotor ပေါင်းစည်းရေးစဉ်အတွင်း Chang ကအယ်လ် ALTER ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: ဆက်ဆံရေး cortisol ပမာဏဖြစ်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 2011;31:17923–17931. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4148-11.2011. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
King AC, Hasin D. , O'Connor SJ, McNamara PJ, Cao D. ၅ ရက်ကြာအရက်သောက်သုံးသောအရက်အလွန်အကျွံသောက်သူများတွင်အရက်တုံ့ပြန်မှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2016;79: 489-498 ။ Doi: 10.1016 / J.BIOPSYCH.2015.05.007 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Knych ET သည်သတိကြွက်များတွင်ပလာစမာ corticosterone အပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏ Eisenberg RM Effect ။ Neuroendocrinology ။ 1979;29: 110-118 ။ Doi: 10.1159 / 000122912 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Kobayashi အက်ဖ်, Watanabe ကတီ, Akamatsu Y. , Furui အိပ်ချ်, Tomita တီ, Ohashi R. , အလုပ်စဉ်အတွင်းတက္ကစီယာဉ်မောင်း၏နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအပေါ်စီးကရက်ဆေးလိပ်၏ Hayano ဂျေထူးခြားသောသက်ရောက်မှု။ Scand ။ ဂျေသူ Work ။ ပတ်ဝန်းကျင်။ ကျန်းမာရေး။ 2005;31: 360-366 ။ Doi: 10.5271 / sjweh.919 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Kollins SH, Rush CR အသိမြှသညျလူသားတို့အတွက်ခံတွင်းကိုကင်းများ၏နှလုံးသွေးကြောသော်လည်းမဘာသာရပ်-rated ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;51:143–150. doi: 10.1016/S0006-3223(01)01288-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Kollins SH, Schoenfelder EN, English JS, Holdaway A. ၊ Van Voorhees E. , O'Brien BR, Dew R. , Chrisman AK နှုတ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သော methylphenidate နှင့် Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ၏ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများလေ့လာခြင်းလေ့လာမှု။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ function ကို, ပုဂ္ဂလဒိeffects္သက်ရောက်မှုများနှင့်ကျန်းမာလူကြီးများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်။ ဂျေ Subst ။ အလွဲသုံးစားမှုဆက်ဆံပါ။ 2015;48: 96-103 ။ Doi: 10.1016 / J.JSAT.2014.07.014 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Kosten TR, Kosten က TA, McDougle CJ, Hameedi အက်ဖ်အေ, McCance EF, ရို MI, Oliveto AH, လူသားကင်းအုပ်ချုပ်ရေး intranasal တုံ့ပြန်စျေး LH ကျားကွဲပြားခြားနားမှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996;39:147–148. doi: 10.1016/0006-3223(95)00386-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Kubena RK, Perhach JL, ကြွက်များတွင်Δ1-tetrahydrocannabinol အားဖြင့်ဗဟိုကမကထပြုခဲ့ Barry အိပ်ချ် Corticosterone မြင့်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 1971;14:89–92. doi: 10.1016/0014-2999(71)90128-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Kuhn C. , ကိုကင်း-သွေးဆောင် HPA ဝင်ရိုး activation အတွက် Francis က R. ကျားခြားနားချက်။ Neuropsychopharmacology ။ 1997;16:399–407. doi: 10.1016/S0893-133X(96)00278-3. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Latson TW, McCarroll သည် SM, Mirhej MA, Hyndman VA သို့, Whitten CW, နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအပေါ်သုံးထုံဆေးသော induction နည်းစနစ်၏ Lipton JM အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဂျေ Clin ။ Anesth ။ 1992;4(4):265–276. doi: 10.1016/0952-8180(92)90127-M. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Le အေဒီ, Funk ဃ, Juzytsch ဒဗလျူ, Coen K. , Navarre BM, Cifani C. , အရက်နှင့်ကြွက်များအတွက်ရှာကြံအစားအစာစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အပေါ် prazosin နှင့် guanfacine ၏ Shaham Y. Effect ။ Psychopharmacology (Berl) 2011;218:89–99. doi: 10.1007/s00213-011-2178-7. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
သည် Le Moal အမ်, Koob gf မူးယစ်ဆေးစွဲ: ရောဂါမှ Pathways နှင့် pathophysiological အမြင်များ။ အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacol ။ 2007;17: 377-393 ။ Doi: 10.1016 / J.EURONEURO.2006.10.006 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Levy အေဒီလီဆိုးကျိုး, Kerr je, Rittenhouse PA ဆိုပြီး, Milonas G. အ, Cabrera TM, Battaglia G. အ, Alvarez Sanz MC, Plasma Adrenocorticotropin ဟော်မုန်းနှင့် Corticosterone ၏ဗန် De အာကာ ld ကင်း-သွေးဆောင်မြင့်တက် Serotonergic အာရုံခံ 1 ကကမကထပြုခဲ့သည်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ ကုထုံး။ 1991;259: 495-500 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Lijffijt အမ်, Hu K. , Swann AC အစိတ်ဖိစီးမှုပစ္စည်းအသုံးပြုမှု Disorders ၏ဖြားနာ-သင်တန်းအမှတ်စဥ် modulates: တစ်ဦးက Translational ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ တပ်ဦး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014;5: 83 ။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2014.00083 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Lindgren J.-E. , Ohlsson အေ, Agurell အက်စ်, Hollister L. , Gillespie အိပ်ချ် Springer-Verlag; 1981 ။ လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆေးခြောက်, Psychopharmacology ၏အကြီးစားနှင့်အလင်းအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဦးက 9-Tetrahydrocannabinol (က 9-THC) ၏ Plasma Levels နဲ့။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Livezey GT ကို, Balabkins N. , Vogel WH တစ်ဦးချင်းအမျိုးသမီးနှင့်အထီးကြွက်များတွင်ပလာစမာ catecholamines အဆင့်ဆင့်အပေါ်အီသနော (အရက်) နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychobiology ။ 1987;17: 193-198 ။ Doi: 10.1159 / 000118364 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Longo DL, Volkow ND, Koob gf, McLellan ကို AT Neurobiologic စွဲ၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ်ကနေတိုးတက်လာ။ N. Engl ။ ဂျေ Med ။ 2016;374: 363-371 ။ Doi: 10.1056 / NEJMra1511480 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
စွဲလမ်းနှင့်စွဲလမ်းအန္တရာယ်အတွက် Lovallo WR cortisol Secret ပုံစံများ။ int ။ ဂျေ Psychophysiol ။ 2006;59: 195-202 ။ Doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2005.10.007 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Lovallo WR ငယ်ဘဝဒုက္ခစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူပိုကောင်းစေပါတယ်: ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ int ။ ဂျေ Psychophysiol ။ 2013;90: 8-16 ။ Doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2012.10.006 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Lutfy K. , Aimiuwu O. , Mangubat အမ်, ရှင် C.-S. , Nerio N. , ဂိုမက်ဇ R. , လျူ Y. , Friedman TC နီကိုတင်း CRH နှင့် AVP receptors နှစ်ဦးစလုံးကနေတဆင့် corticosterone ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလှုံ့ဆျော။ ဂျေ Neurochem ။ 2012;120: 1108-1116 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [Google Scholar]
Lynch WJ, Sughondhabirom အေ, Pitmann ကခ, Gueorguieva R. , Kalayasiri R. , ယောရှုဃ, မော်ဂန် P. , Coric V. , Malison RT ကိုလူ့ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏စည်းမျဉ်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်ဦးကပါရာဒိုင်း: တစ် Random ရုံးတင်စစ်ဆေး။ Psychopharmacology (Berl) 2006;185:306–314. doi: 10.1007/s00213-006-0323-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Lynch WJ, Kalayasiri R. , Sughondhabirom အေ, Pitmann ကခ, Coric V. , မော်ဂန် PT, Malison RT ကိုဘာသာရပ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ကင်း-အလွဲသုံးစားလုပ်ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများ၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ စှဲလမျးသူ။ Biol ။ 2008;13:403–410. doi: 10.1111/j.1369-1600.2008.00115.x. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Manetti L. , Cavagnini အက်ဖ် Martino ကအီး, အ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအပေါ်ကိုကင်းများ၏ Ambrogio အေအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဂျေ Endocrinol ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ 2014;37:701–708. doi: 10.1007/s40618-014-0091-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Marinelli အမ်, glucocorticoid ဟော်မုန်း, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် psychostimulant မူးယစ်ဆေးအကြား Piazza PV Interaction ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2002;16: 387-394 ။ Doi: 10.1046 / j.1460-9568.2002.02089.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Martinez ဃ, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် Narendran R. Imaging က neurotransmitter လွှတ်ပေးရန်။ Curr ။ ထိပ်တန်း။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2010;3: 219-245 ။ Doi: 10.1007 / 7854_2009_34 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Martinez ဃ, လက်သမား KM, လျူအက်ဖ်, Slifstein အမ်, Broft အေ, Friedman AC အ, Kumar ကဃ, ဗန် Heertum R. , Kleber HD ကို, ကိုကင်းမှီခိုအတွက် Nunes အီး Imaging က dopamine ဂီယာ: neurochemistry နှင့်တုံ့ပြန်အကြား link ကို ကုသမှု။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011;168: 634-641 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.2010.10050748 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Martins အက်စ်အက်စ်, Segura LE, Santaella-Tenorio ဂျေ, Perlmutter အေ, Fenton MC, Cerdáအမ်, Keyes KM, Ghandour LA က, စတောစျ CL, ထိုအတွက် 12-34 နှစ်ကြားရှိသူတို့တွင် Hasin DS ညွှန်း opioid အသုံးပြုမှုရောဂါနှင့်ဘိန်းဖြူကိုအသုံးပြုခြင်း 2002 ထံမှ 2014 ဖို့အမေရိကန်။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေကျော်လွန်ပြီး။ 2017;65: 236-241 ။ Doi: 10.1016 / j.addbeh.2016.08.033 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Martin-Calderon, JL, Muñoz RM, Villanúa MA, del Arco ဗြဲ, Moreno JL, က de Fonseca FR ၏စူးရှသော endocrine အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကို Navarro အမ်စရိုက်လက္ခဏာတွေ (-) - 11-hydroxy-Δ8-tetrahydrocannabinol-dimethylheptyl (Hu-210 ), ကြွက်များတွင်အစွမ်းထက်ဒြပ် cannabinoid ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 1998;344:77–86. doi: 10.1016/S0014-2999(97)01560-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ, Singh ကဂျေ, Sharp က BM catecholamines α-adrenergic receptors မှတဆင့်နီကိုတင်း-သွေးဆောင် adrenocorticotropin လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖျန်ဖြေ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1990;127: 1646-1655 ။ Doi: 10.1210 / endo-127-4-1646 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
မက်ဒေါ်နယ်တီ, ဟော့ဖ်မန်း WE, Berkowitz R. , Cunningham အက်ဖ်လူနာချက်ပြုတ်ခနှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သွေးရည်ကြည် catecholamines opioid detoxification ကာလအတွင်း။ ဂျေ Neurosurg ။ Anesthesiol ။ 1999;11: 195-199 ။ [PubMed] [Google Scholar]
McDougle CJ, Black က je, Malison RT ကို, Zimmermann RC, Kosten TR, Heninger ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, စျေး LH Noradrenergic စွဲထဲမှာကိုကင်းသုံးစွဲမှုပြတ်တောက်စဉ်အတွင်း dysregulation ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatric ။ 1994;51: 713-719 ။ [PubMed] [Google Scholar]
McKee အက်စ်တစ်ဦး, Sinha R. , Weinberger AH, Sofuoglu အမ်, Harrison ELR, Lavery အမ်, Wanzer ဂျေစိတ်ဖိစီးမှုဆေးလိပ်သောက်ခုခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆုလာဘ် potentiates ။ ဂျေ Psychopharmacol ။ 2011;25: 490-502 ။ Doi: 10.1177 / 0269881110376694 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
McRae-Clark က AL, Carter က RE, စျေး KL, Baker NL, သောမတ်စ်အက်စ်, Saladin ME, Giarla ကေ, က Nicholas K. , Brady KT Stress- နှင့်ဆေးခြောက်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် cue-ရူးနှမ်းတဏှာနှင့် reactivity ကို။ Psychopharmacology (Berl) 2011;218:49–58. doi: 10.1007/s00213-011-2376-3. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Mello NK ဟော်မုန်း, နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်း: လက်တွေ့လေ့လာမှုများ။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 2010;58: 57-71 ။ Doi: 10.1016 / j.yhbeh.2009.10.003 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Mendelson ဂျေ, စမ်းသပ်သွေးဆောင်အီသနောမူးစဉ်အတွင်းအရက်နှင့် Nonalcoholic ဘာသာရပ်များအတွက် Stein အက်စ် Serum cortisol ပမာဏ။ Psychosom ။ Med ။ 1966;28: 616-626 ။ [Google Scholar]
Mendelson JH, Meyer RE, Ellingboe ဂျေ, Mirin သည် SM, ပလာစမာ cortisol နှင့် testosterone ဟော်မုန်းအပေါ်ဘိန်းဖြူနှင့် methadone ၏ McDougle အမ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ ကုထုံး။ 1975;195 [PubMed] [Google Scholar]
Mendelson JH, Teoh SK ကို, Lang U. , Mello NK, Weiss R. , Skupny အေ, ကင်းဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း Ellingboe ဂျေ anterior pituitary, adrenal နှင့် gonadal ဟော်မုန်း။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1988;145: 1094-1098 ။ Doi: 10.1176 / ajp.145.9.1094 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Mendelson JH, Sholar ကို MB, Goletiani N. , Siegel AJ, ယောက်ျားအတွက်ခံစားချက်ပြည်နယ်များနှင့် HPA ဝင်ရိုးပေါ်ဆေးလိပ်နည်းပါးခြင်းနှင့်မြင့်မားသောနီကိုတင်းစီးကရက်၏ Mello NK အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 1751-1763 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300753 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Mendelson JH, Goletiani N. , Sholar ကို MB, Siegel AJ, Hypothalamic-Pituitary-Adrenal ဝင်ရိုးတန်းဟော်မုန်းနှင့်အမျိုးသားများအတွက် Mood အပေါ်အဆက်ဆက်နိမ့်ပိုင်းတွင်နှင့် Hight-နီကိုတင်းစီးကရက် Smoking ၏ Mello NK အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33: 749-760 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301455 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
စွဲလမ်းမှုအန္တရာယ်နှင့် Relapse အားနည်းများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏ Milivojevic V. , Sinha R. ဗဟိုနှင့် Peripheral Biomarkers ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Mol ။ Med ။ 2018 Doi: 10.1016 / j.molmed.2017.12.010 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Minami ဂျေ, Ishimitsu တီ, သွေးဖိအားအပေါ်ဆေးလိပ်သောက်ချုပ်ရာ၏ Matsuoka အိပ်ချ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်လေ့ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်း variable ။ သွေးတိုး။ 1999;33: 586-590 ။ Doi: 10.1161 / 01.HYP.33.1.586 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Moldow RL, ACTH, beta-နဲ့အတူ Endorphins နှင့် corticosterone ၏ Fischman AJ ကင်းသွေးဆောင် Secret ။ Peptides ။ 1987;8:819–822. doi: 10.1016/0196-9781(87)90065-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
နီကိုတင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှ Morse က DE Neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု: နီကိုတင်း၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်အရံစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများတိုးမြှင့်။ Psychopharmacology (Berl) 1989;98: 539-543 ။ Doi: 10.1007 / BF00441956 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Motaghinejad အမ်, Bangash MY, အရက်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါနှင့် diazepam နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတင်းအကျပ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့အသှေးကို cortisol အဆင့် Motaghinejad O. attenuation ။ Acta Med ။ အီရန်။ 2015;53: 312-317 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Munro, CA, McCaul ME, Wong က DF, Oswald LM, Zhou Y. , Brasic ဂျေ, Kuwabara အိပ်ချ်, Kumar ကအေအလက်ဇန္ဒားအမ်, သငျတို့သဒဗလျူ, ကျန်းမာရေးလူကြီးများအတွက် Striatal Dopamine သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ Wand GS လိင်ကွာခြားချက်များ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;59: 966-974 ။ Doi: 10.1016 / J.BIOPSYCH.2006.01.008 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Naber ဃ, Pickar ဃ, Davis က GC, Cohen ကို RM, Jimerson, DC, Elchisak MA, Defraites ဥပမာ Kalin နယူးဟမ်းရှား, Risch SC, ပလာစမာထဲမှာ beta ကို-နဲ့အတူ Endorphins, cortisol, prolactin, ကြီးထွားဟော်မုန်း, HVA နှင့် MHPG အပေါ် Buchsbaum က MS Naloxone ဆိုးကျိုးများ ပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်း။ Psychopharmacology (Berl) 1981;74: 125-128 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Nagano-Saito အေ, Dagher အေ, Booij L. , ကျောက်စရစ်ပီ, Welfeld K. , Casey KF, Leyton အမ်, လူ့ medial prefrontal Cortex-18F-fallypride / ပေလေ့လာမှုမှာ Benkelfat C. စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း။ synapses ။ 2013;67: 821-830 ။ Doi: 10.1002 / syn.21700 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Nava အက်ဖ်, Caldiroli အီး, Premi အက်စ်, abstinent နှင့်ကုသဘိန်းဖြူစွဲများတွင်ပလာစမာ cortisol ပမာဏ, ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေနှင့်တဏှာအကြား Lucchini အေဆက်ဆံရေး။ ဂျေစွဲ။ dis ။ 2006;25:9–16. doi: 10.1300/J069v25n02_02. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Nurnberger JI, လူကို dextroamphetamine ရန်, အမူအကျင့်နှလုံးသွေးကြောများနှင့်ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုများအတွက် Simmons-Alling အက်စ်, Kessler L. , Jimerson အက်စ်, Schreiber ဂျေ, Holland အီး, Tamminga, CA, Nadi NS, စတိန်း DS, ဂေရရှုန် ES သီးခြားယန္တရားများ ။ Psychopharmacology (Berl) 1984;84: 200-204 ။ Doi: 10.1007 / BF00427446 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Okada အက်စ်, Shimizu တီ, Yokotani K. Extrahypothalamic corticotropin-releasing ဟော်မုန်းဖျန်ဖြေ (-) - ကြွက်များတွင်ပလာစမာ corticosterone ၏နီကိုတင်း-သွေးဆောင်မြင့်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 2003;473:217–223. doi: 10.1016/S0014-2999(03)01966-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Oswald LM, Wong က DF, McCaul အမ်, Zhou Y. , Kuwabara အိပ်ချ်, Choi L. , Brasic ဂျေ, Wand GS ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ventral striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်, cortisol လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်စိတ်ကြွဆေးမှပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုအကြား။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 821-832 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300667 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒုက္ခ Oswald LM, Wand GS, Kuwabara အိပ်ချ်, Wong က DF, Zhu အက်စ်, Brasic JR သမိုင်းအပြုသဘောစိတ်ကြွဆေးမှ ventral striatal dopamine တုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 2014;231:2417–2433. doi: 10.1007/s00213-013-3407-z. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Parrott ACC, တွင် Sands HRR, ဂျုံးစ် L. , Clow အေ, အီဗန်ပီ, Downey LAA, Stalder တီမကြာသေးမီ Ecstasy / MDMA အသုံးပြုသူဆံပင်အတွက် cortisol ပမာဏတိုးမြှင့်။ အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacol ။ 2014;24: 369-374 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Perkins Ka, Coddington SB, Karelitz JL, Jetton C. , Scott ဂျာ Wilson က AS, Lerman C. variable လိင်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏သမိုင်း, မိဘဆေးလိပ်သောက်မှုကြောင့်ကနဦးနီကိုတင်း sensitivity ကိုပါ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2009;99: 47-57 ။ Doi: 10.1016 / J.DRUGALCDEP.2008.06.017 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
အဆိုပါကြောင်၏ Adrenal Medulla ထံမှလျှို့ဝှက်ချက်များကိုအပေါ် Ethyl Alcohol ၏အပြီးတိုင် ES အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Acta Physiol ။ Scand ။ 1960;48: 323-328 ။ Doi: 10.1111 / j.1748-1716.1960.tb01866.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
OF Pomerleau တစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားနှင့် / သို့မဟုတ်နီကိုတင်းဖို့ Pomerleau CS cortisol တုံ့ပြန်မှု။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1990;36:211–213. doi: 10.1016/0091-3057%2890%2990153-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Pruessner JC, ရှန်ပိန်အက်ဖ်, Meaney MJ တစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသားတွေအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အစောပိုင်းဘဝမိခင်စောင့်ရှောက်မှုက၎င်း၏ဆက်ဆံရေးတုန့်ပြန် Dagher အေ Dopamine လွှတ်ပေးရန်: [11C] raclopride သုံးပြီး positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ ဂျေ neuroscience ။ 2004;24: 2825-2831 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3422-03.2004 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
နဂိုအတိုင်းနှင့် hypothalamic deafferentated အထီးကြွက်များတွင် Puder အမ်, Weidenfeld ဂျေ, Chowers ဗြဲ, NIR ဗြဲ, Conforti N. , Siegel RA Corticotrophin နှင့်Δ1-tetrahydrocannabinol အောက်ပါ corticosterone Secret ။ Exp ။ ဦးနှောက် Res ။ 1982;46: 85-88 ။ Doi: 10.1007 / BF00238101 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ကင်တားနား DS, လို့ McGregor က Short-Term နားခိုရာ-ပြည်နယ်နှလုံးခုန်နှုန်း variable ပေါ်အရက်မူတည်၏သက်ရောက်မှုအပေါ်, Guastella AJ, Malhi GS, Kemp AH တစ်ဦးတွင် Meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း IS: နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2013;37: 23-29 ။ Doi: 10.1111 / j.1530-0277.2012.01913.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Ramchandani VA, Flury L. , Morzorati SL, Kareken D. , Blekher T. , Foroud T. , Li T.-K. , O'Connor S. မကြာမီသောက်စားခြင်းသမိုင်း - မိသားစုအရက်၏မိသားစုသမိုင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ 60 မီလီဂရမ်% ညှပ်စဉ်အတွင်း။ ဂျေလုံး။ အရက်။ 2002;63: 734-744 ။ Doi: 10.15288 / jsa.2002.63.734 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Ramesh D. , Haney M. , Cooper ZD ဆေးခြောက်သည်နေ့စဉ်ဆေးခြောက်သောက်သူများအတွက်ဆေးမှီခိုမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2013;21: 287-293 ။ Doi: 10.1037 / a0033661 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Ranganathanathan အမ်၊ Braley G. ၊ Pittman ခ၊ Cooper T. , Perry E. , Krystal ဂျေ၊ D'Souza DC လူသားများသည်သွေးရည်ကြည် cortisol နှင့် prolactin အပေါ်ဆေးခြောက်၏သက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl) 2009;203:737–744. doi: 10.1007/s00213-008-1422-2. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ရိဒ်က MS, Flammino အက်ဖ်, Howard ခ, Nilsen ဃလူသားများအတွက်သောက်သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန်အရေအတွက် EEG ၏ Prichep LS မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ပုံရိပ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2006;31: 872-884 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300888 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
အဆိုပါ Gilt '' Secret အတွက်ရစ်ချတ် C. , Scoti C. , Luteinizing ဟော်မုန်း၏ Estrous ၏အဆင့်၏စယ်ခသြဇာလွှမ်းမိုးမှု, Endogenous နှင့် cortisol Opioid Modulation အပေါ် Cycle ။ Biol ။ Reprod ။ 1986;35: 1162-1167 ။ Doi: 10.1095 / biolreprod35.5.1162 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Richardson HN, Lee SY, O'Dell LE, Koob GF, Rivier CL အရက်ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးသည် hypothalamic-pituitary- adrenal ၀ င်ရိုးကိုပြင်းထန်စွာလှုံ့ဆော်သော်လည်းအရက်ကိုမှီခိုနေရခြင်းသည် neuroendocrine ပြည်နယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2008;28:1641–1653. doi: 10.1111/j.1460-9568.2008.06455.x. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Risher-ပန်းပွင့်ဃ, Adinoff ခ, Ravitz ခ, အရိုး G. အမာတင်ပီ, Nutt ဃ, အရက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း cortisol ၏ Linnoila အမ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian rhythms ။ Adv ။ အရက် Subst ။ အလွဲသုံးမှု။ 1988;7:37–41. doi: 10.1300/J251v07n03_06. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Rittmaster RS, Cutler GB ကို, Sobel D.0, စတိန်း DS, Koppelman MCS, Loriaux DL, Chrousos မိသားစုဆရာဝန်မော်ဖင်းအကိုက်ပုံမှန်ဘာသာရပ်များအတွက် Ovine Corticotropin-ဖြင့်ထုတ်လွှဟော်မုန်း * ရန် Pituitary-Adrenal တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဂျေ Clin ။ Endocrinol ။ ဇီဝြဖစ်။ ၂၀၁၂ [PubMed] [Google Scholar]
Romanowicz အမ်, Schmidt က je, Bostwick JM, Mrazek DA စူးရှသောအရက်စားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအတွက် Karpyak VM ကအပြောင်းအလဲများ: လက်ရှိအသိပညာနှင့်အလေ့အကျင့်နှင့်သုတေသနတို့အတွက်ဂယက်ရိုက်။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2011;35: 1092-1105 ။ Doi: 10.1111 / j.1530-0277.2011.01442.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Rook EJ, ဗန် Ree JM, ဗန် Den ချောက်ကမ်းပါးဒဗလျူ, Hillebrand MJX, Huitema ADR, Hendrik VM က, Beijnen JH Pharmacokinetics နှင့်ဆေးဝါးမြင့်မားဆေးများ၏ pharmacodynamics သွေးကြောသွင်းခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ် opioid-မှီခိုလူနာရှူရှိုက်မိလမ်းကြောင်းအသုံးပြုပုံဘိန်းဖြူပြင်ဆင်ကြ၏။ အခြေခံပညာ Clin ။ Pharmacol ။ Toxicol ။ 2006;98: 86-96 ။ Doi: 10.1111 / j.1742-7843.2006.pto_233.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Rushen ဂျေ, Schwarz N. , Ladewig ဂျေ, ACTH, cortisol, prolactin နှင့်ဝက်အတွင်းကြီးထွားဟော်မုန်းအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ Foxcroft G. အ Opioid မော်ဂျူ။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 1993;53:923–928. doi: 10.1016/0031-9384(93)90270-. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sachar EJ, Asnis G. အ, နေသန် RS, Halbreich U. , Tabrizi MA, ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ထဲမှာ Halpern FS Dextroamphetamine နှင့် cortisol ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatric ။ 1980;37: 755 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.1980.01780200033003 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Saphier ဃ, Welch je, Farrar GE, adrenocortical Secret အပေါ် intracerebroventricular နှင့် intrahypothalamic ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး Goeders NE အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuroendocrinology ။ 1993;57: 54-62 ။ Doi: 10.1159 / 000126342 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sarnyai Z. , Bíróe။ , Penke ခ, Telegdy G. အပလာစမာ corticosterone ၏ကင်း-သွေးဆောင်မြင့်ကြွက်များတွင် endogenous corticotropin-releasing အချက် (CRF) ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1992;589:154–156. doi: 10.1016/0006-8993(92)91176-F. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Schuckit MA, Tsuang JW, Anthenelli RM, Tipp je, Nurnberger JI အရက်အရက် pedigree နှင့်ထိန်းချုပ်မှုမိသားစုများအနေဖြင့်လူပျိုတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုများ: အ COGA စီမံကိန်းအတွက်ကနေအစီရင်ခံစာ။ ဂျေလုံး။ အရက်။ 1996;57: 368-377 ။ Doi: 10.15288 / jsa.1996.57.368 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Seyler LE, Fertig ဂျေ, Pomerleau O. , Hunt ကဃ, က Parker K. acth နဲ့ Cortisol လျှို့ဝှက်ချက်ပေါ်ဆေးလိပ်၏ဆိုးကျိုးများ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1984;34:57–65. doi: 10.1016/0024-3205(84)90330-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sharma ကဂျေ, Rathnayaka N. , အစိမ်းရောင် C. , Moeller အပြည်ပြည်သွား, Schmitz JM, ဟံဃ, Dougherty AH Bradycardia နာတာရှည်ကင်းသုံးစွဲမှုတစ်မှတ်သားမှုအဖြစ်: တစ်ဦးကဝတ္ထုနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရှာဖွေခြင်း။ ပြုမူနေ။ Med ။ 2016;42: 1-8 ။ Doi: 10.1080 / 08964289.2014.897931 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ရှီဂျေလီအက်စ်, Zhang က X တို့မှာ, ဝမ် X တို့မှာ, Foll ခလဲ့, Zhang က X.-Y. , Kosten TR, Lu ကအယ်လ်အချိန်-မှီခိုဘိန်းဖြူအတွက် Abstinence ၏ပထမဦးဆုံးလကာလအတွင်း Neuroendocrine ALTER နှင့်ဆေးဝါးတဏှာ စွဲ။ နံနက်။ ဂျေမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2009;35: 267-272 ။ Doi: 10.1080 / 00952990902933878 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Shiffman အက်စ်၊ Zettler-Segal အမ်၊ ကတ်ဆဲလ်ဂျေ၊ ပက်တီဂျေ၊ ဘနော့ဝစ် NL၊ အိုဘရားဂျီနီကိုတင်းဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) 1992;109: 449-456 ။ Doi: 10.1007 / BF02247722 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sinha R. ဘယ်လိုစိတ်ဖိစီးမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် relapse ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ပါသလဲ? Psychopharmacology (Berl) 2001;158: 343-359 ။ Doi: 10.1007 / s002130100917 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sinha R. နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စွဲမှအားနည်းချက်။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 2008;1141: 105-130 ။ Doi: 10.1196 / annals.1441.030 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
စွဲ relapse အားနည်းချက်ခန့်မှန်းဇီဝအချက်များပေါ်တွင် Sinha R. နယူးတွေ့ရှိချက်။ Curr ။ Psychiatric ။ rep ။ 2011;13:398–405. doi: 10.1007/s11920-011-0224-0. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sinha R. မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏လက်တွေ့ neurobiology ။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 2013 Doi: 10.1016 / j.conb.2013.05.001 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sinha R. လီ CSR Imaging က stress- နှင့် cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်တဏှာ: relapse နှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့။ မူးယစ်ဆေးအရက်ဗျာ 2007;26: 25-31 ။ Doi: 10.1080 / 09595230601036960 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sinha R. , Garcia ကအမ်, Paliwal P. , Kreek MJ, Rounsaville BJ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာနှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှုကင်း relapse ရလဒ်များ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatric ။ 2006;63: 324-331 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.63.3.324 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sinha R. , Lacadie CM, Constable RT ကို, Seo ဃ Dynamic အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုစိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်းဒဏ်ခံဖြေရှင်းအချက်ပြလိုက်ခြင်း။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ 2016;113: 8837-8842 ။ Doi: 10.1073 / pnas.1600965113 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sjoberg N. , စိန့် DA တစ်ဦးကလူပျို4ကျန်းမာရေးကွေအတွက်နီကိုတင်း Decrease နှလုံးခုန်နှုန်း variable ၏ဆေးသောက်ရန် mg: ဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်း Programs ကိုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နီကိုတင်းတောဘ။ res ။ 2011;13: 369-372 ။ Doi: 10.1093 / ntr / ntr004 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Söderpalmအေ, Nikolayev အယ်လ်လူသားများအတွက်စိတ်ကြွဆေးမှတုံ့ပြန်မှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုက de ကျေးအိပ်ချ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2003;170:188–199. doi: 10.1007/s00213-003-1536-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sofuoglu အမ်, သွေးကြောသွင်းနီကိုတင်းဖို့ Mooney အမ် Subject တုံ့ပြန်ချက်: အမျိုးသားများအတွက်အမျိုးသမီးသန်းအတွက် သာ. ကွီးမွတျအာရုံ။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2009;17: 63-69 ။ Doi: 10.1037 / a0015297 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sofuoglu အမ်, Dudish-Poulsen အက်စ်, နယ်လ်ဆင်ဃ, Pentel PR စနစ်, Hatsukami DK လိင်နှင့်လူသားတွေအတွက်သောက်သည်ကိုကင်းကနေပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆိုးကျိုးများအတွက်ရာသီစက်ဝန်းကွဲပြားခြားနားမှု။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 1999;7: 274-283 ။ Doi: 10.1037 / 1064-1297.7.3.274 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sofuoglu အမ်, နယ်လ်ဆင်ဃ, Babb DA, Hatsukami DK သွေးကြောသွင်းကင်းသောလူသားမြားအတွက်ပလာစမာ epinephrine နှင့် norepinephrine တိုးပွားစေပါသည်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 2001;68:455–459. doi: 10.1016/S0091-3057(01)00482-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sofuoglu အမ်, Herman AI အ, Nadim အိပ်ချ်, Jatlow P. Rapid နီကိုတင်းရှင်းလင်းမဟာဆုကြေးနှင့်အတူဆက်စပ်နေတဲ့နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းသွေးကြောသွင်းနီကိုတင်းကနေတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2012;37: 1509-1516 ။ Doi: 10.1038 / npp.2011.336 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Somaini L. , Manfredini အမ်, Amore အမ်, Zaimovic အေ, Raggi MA, Leonardi C. , Gerra ML, Donnini C. , Gerra G. အ Psychobiological ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက်မနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်ခံစားမှုမှတုံ့ပြန်မှု။ အီးယူအာရ်။ Arch ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Clin ။ neuroscience ။ 2012;262:47–57. doi: 10.1007/s00406-011-0223-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Spronk DB, ဗန် Wel JHP, Ramaekers JG, Verkes RJ ကင်း၏သိမြင်မှုသက်ရောက်မှု Characterizing: တစ်ဦးကပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2013;37: 1838-1859 ။ Doi: 10.1016 / J.NEUBIOREV.2013.07.003 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Starcke K. , ဗန် Holst RJ, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါးဒဗလျူ, Veltman DJ သမား, Goudriaan AE ဇီဝနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်မှုများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမှ endocrine တုံ့ပြန်မှု: abstinence ကိစ်စရပျ Duration: ။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2013;37: 1343-1350 ။ [PubMed] [Google Scholar]
အရက်သမားအတွက် Stokes PE Adrenocortical activation ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1973;215: 77-83 ။ Doi: 10.1111 / j.1749-6632.1973.tb28251.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Stormark KM, Laberg JC, Nordby အိပ်ချ်, Hugdahl K. နှလုံးခုန်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုသော့ခတ်-in ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုကြိုတင်အရက်သောက်ဖို့ချက်ချင်းအရက်သမားအတွက်ဖော်ပြသည်။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 1998;23:251–255. doi: 10.1016/S0306-4603(97)00026-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Strougo အေ, Zuurman L. , ရွိုင်း C. , Pinquier ဂျေ, ဗန် Gerven ဂျေ, Cohen ကိုအေ, ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ parameters တွေကိုနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအပေါ် THC များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု-အကျိုးသက်ရောက်မှုဆက်ဆံရေး Schoemaker R. မော်ဒယ်လင်း - င်း၏ယန္တယားသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှု အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနှင့် cannabinoids ၏လက်တွေ့သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများအတွက် tool ကို၏။ ဂျေ Psychopharmacol ။ 2008;22: 717-726 ။ Doi: 10.1177 / 0269881108089870 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Suemaru အက်စ်, Dallman MF, Darlington DN, Cascio CS သည်ကြွက်များတွင် hypothalamo-pituitary-adrenocortical နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်များပေါ်တွင်မော်ဖင်းအကိုက်ဆိုးကျိုးများအတွက် alpha-adrenergic ယန္တရား၏ Shinsako ဂျေအခန်းက္ပ။ Neuroendocrinology ။ 1989;49: 181-190 ။ Doi: 10.1159 / 000125112 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Sutker PB, Goist KC, အမျိုးသမီးများနေ့မှာဘုရငျ AR ထူးခြားသောအရက်မူး: ဆက်ဆံရေးထိုးရန်နှင့်ရာသီလာခြင်း Cycle အဆင့်။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 1987;11: 74-79 ။ Doi: 10.1111 / j.1530-0277.1987.tb01266.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Swerdlow ရော်ဘာ, Koob gf, Cador အမ်, Lorang အမ်သည်ကြွက်များတွင်စူးရှစိတ်ကြွဆေးမှ Hauger RL Pituitary-adrenal ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှု။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1993;45:629–637. doi: 10.1016/0091-3057(93)90518-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Tapper eb, United States မှာအသည်းခြောက်ခြင်းနှင့်အသည်းကင်ဆာ, 1999-2016 ကြောင့် Parikh အဲန်ဒီသေဆုံးမှု: စူးစမ်းလေ့လာမှု။ BMJ ။ 2018;362 Doi: 10.1136 / BMJ.K2817 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ယော JF, ခန်းမအမ်, Sollers JJ, ပုံကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားများတွင် Fischer je အရက်သုံးစွဲခြင်း, ဆီး cortisol နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ: မိုးသည်းထန်စွာသောက်အတွက် HPA ဝင်ရိုး၏ချို့ယွင်း inhibitory ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အထောက်အထား။ int ။ ဂျေ Psychophysiol ။ 2006;59: 244-250 ။ Doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2005.10.013 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Tizabi Y. , Copeland RL, လူးဝစ် VA သို့, အနျူကလိယ Accumbens အတွက် Dopamine သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် Ventral Tegmental ဧရိယာသို့ပေါင်းချုပ်စနစ်အရက်နှင့်ဗဟိုနီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေး၏တေလာ RE အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2002;26: 394-399 ။ Doi: 10.1111 / j.1530-0277.2002.tb02551.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Tsuji အိပ်ချ်, Venditti FJ, Manders ES, အီဗန် JC, Larson MG, Feldman CL, နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ၏ Levy ဃပြဌာန်းခွင့်။ ဂျေ Am ။ Coll ။ Cardiol ။ 1996;28:1539–1546. doi: 10.1016/S0735-1097(96)00342-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
အမေရိကန်ကျန်းမာရေးနှင့်လူသားဝန်ဆောင်မှုများဌာန။ HHS; ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ၊ ၂၀၁၆ ။ အမေရိကရှိစွဲလမ်းမှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပုံ - အရက်သေစာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဆရာဝန်၏အစီရင်ခံစာ။ [Google Scholar]
Välimäki MJ, Härkönenအမ်, ပေတရု Eriksson CJ, Ylikahri RH အလိင်ဟော်မုန်းနှင့်စူးရှသောအီသနောနှင့်အတူယစ်မူးလူ adrenocortical steroids ။ အရက်။ 1984;1:89–93. doi: 10.1016/0741-8329(84)90043-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဗန်ဆည် NT, Rando K. , Potenza MN, Tuit K. , Sinha R. ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့, ပြောင်းလဲ Limbic Neurobiology နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု Relapse ပြင်းထန်မှု Limbic gray matter Volume ထဲမှာစိတ်ဒဏ်ရာ-Specific လျှော့ချရေးမှတဆင့်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014;71: 917 ။ Doi: 10.1001 / jamapsychiatry.2014.680 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဗန် Hedger K. , Bershad AK စူးရှသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူက de ကျေးအိပ်ချ် Pharmacological စိန်ခေါ်မှုလေ့လာမှုများ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2017;85: 123-133 ။ Doi: 10.1016 / j.psyneuen.2017.08.020 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Vandrey R. , Umbricht အေနေ့စဉ်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုရုတ်တရက်ရပ်စဲပြီးနောက် EC တိုးမြှင့်သွေးဖိအား strain ။ ဂျေစွဲ Med ။ 2011;5:16–20. doi: 10.1097/ADM.0b013e3181d2b309. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Vandrey R. , Stitzer ML, Mintzer MZ စ, Huestis MA, Murray ဂျာ Lee ကဃရေတိုရေရှည် dronabinol ၏ထိုးသက်ရောက်မှုနေ့စဉ်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက် (ပါးစပ် THC) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2013;128: 64-70 ။ Doi: 10.1016 / J.DRUGALCDEP.2012.08.001 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Vongpatanasin ဒဗလျူ, တေလာဂျာကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအပေါ်ကိုကင်းများ၏ဗစ်တာ RG အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နံနက်။ ဂျေ Cardiol ။ 2004;93: 385-388 ။ Doi: 10.1016 / J.AMJCARD.2003.10.028 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Vuong C. , Van Uum SHM, O'Dell LE, Lutfy K. , Friedman TC တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့ endocrine စနစ်များအပေါ် Opioids နှင့် Opioid analog များ၏သက်ရောက်မှုများ။ Endocr ။ ဗျာ 2010;31:98–132. doi: 10.1210/er.2009-0009. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Walsh SL, Haberny Ka လူသားများအတွက်နာတာရှည်ခံတွင်းကိုကင်းများကသွေးကြောသွင်းကင်းသက်ရောက်မှု၏ Bigelow GE Modulation ။ Psychopharmacology (Berl) 2000;150: 361-373 ။ Doi: 10.1007 / s002130000439 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Walsh SL, ကျိုးပဲ့လျက် WW, Moody DE, လင်း S.-N. , Bigelow GE ကလူသားတွေအတွက်ခံတွင်းကိုကင်းနှင့်အတူဟောဒီမှာထပ်ခါတစ်လဲလဲ: တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် pharmacokinetics ၏အကဲဖြတ်။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2009;17: 205-216 ။ Doi: 10.1037 / a0016469 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Walter ဟာအမ်, Wiesbeck GA, Bloch N. , Aeschbach အက်စ်, Olbrich HM, Seifritz အီး, ဘိန်းဖြူ-မှီခိုလူနာ methadone စားသုံးမှုမတိုင်မီနှင့်အပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုမှDürsteler-MacFarland KM Psychobiological တုံ့ပြန်မှု: တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု။ အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacol ။ 2008;18: 390-393 ။ Doi: 10.1016 / J.EURONEURO.2008.01.005 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Walter ဟာအမ်, Wiesbeck GA, ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာခ, Albrich ဂျေ, Oppel အမ်, Schulz အေ, Schachinger အိပ်ချ်, Dursteler-MacFarland KM ဘိန်းဖြူ opioid-ထိန်းသိမ်းထားဘိန်းဖြူ-မှီခိုလူနာအတွက်တုန့်ပြန် startle နဲ့ Cortisol လျော့နည်းစေသည်။ စှဲလမျးသူ။ Biol ။ 2011;16: 145-151 ။ Doi: 10.1111 / j.1369-1600.2010.00205.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Walter ဟာအမ်, Bentz ဃ, Schicktanz N. , Milnik အေ, Aerni အေ, Gerhard C. , Schwegler K. , Vogel အမ်, Blum ဂျေ, Schmid O. , Roozendaal ခ, Lang UE, Borgwardt အက်စ် ဘိန်းဖြူစွဲထဲမှာတဏှာအပေါ် cortisol အုပ်ချုပ်ရေး, က de Quervain ဃအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဘာသာပြန်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2015;5 Doi: 10.1038 / tp.2015.101 ။ e610-e610 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Wand GS, Dobs AS ALTER တက်ကြွစွာသောက်သုံးအရက်သမားအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၌တည်၏။ ဂျေ Clin ။ Endocrinol ။ Metab ။ 1991;72: 1290-1295 ။ Doi: 10.1210 / jcem-72-6-1290 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Wand GS, Oswald LM, McCaul ME, Wong က DF, ဂျွန်ဆင်အီး, Zhou Y. , Kuwabara အိပ်ချ်, စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမှ cortisol တုံ့ပြန်မှု၏ Kumar ကအေအသင်းမှ။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32: 2310-2320 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301373 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ရပ်ကွက် AS, Haney အမ်, Fischman မဂ္ဂါဝပ်, Foltin RW Bing ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးလူသားမြားသဖွငျ့: မီးခိုးကိုကင်း။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 1997;8: 736-744 ။ Doi: 10.1097 / 00008877-199712000-00009 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
watts ၎င်းကိုအဆိုပါနီကိုတင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် Epinephrine ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပေါ်ဆေးလိပ်မသောက်။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1960;90: 74-80 ။ Doi: 10.1111 / j.1749-6632.1960.tb32619.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Wemm အက်စ်, Fanean အေ, Baker အေ, Blough ER, Mewaldt အက်စ်, Bardi အမ်ပြဿနာသောက်သုံးရေနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု။ အရက်။ 2013;47: 149-157 ။ [PubMed] [Google Scholar]
White က TL, Grover VK, D-စိတ်ကြွဆေး၏က de ကျေးအိပ်ချ် cortisol သက်ရောက်မှုမကြောက်တရားများနှင့်ကျူးကျော်ပေမယ့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလူသားမြား၌မစိုးရိမ်စိတ်၏စရိုက်များဆက်စပ်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 2006;85: 123-131 ။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2006.07.020 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Wilkins ဖြစ်မှု, Carlson သူ, ဗန် Vunakis အိပ်ချ်, Hill ကနေ MA, Gritz အီး, Jarvik ME နီကိုတင်းအထီးနာတာရှည်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် cortisol, ကြီးထွားဟော်မုန်းများနှင့် prolactin ၏အဆင့်ဆင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့စီးကရက်ဆေးလိပ်တိုးကနေ။ Psychopharmacology (Berl) 1982;78: 305-308 ။ Doi: 10.1007 / BF00433730 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Zimmermann U. , နွေဦးကေ, Wittchen H.-U. , အရက်-မှီခိုသည်ဘိုးဘေးတို့၏သားအတွက် acoustic ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အီသနောအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စိုးရိမ်စိတ်-related ကိုထိခိုက်ပြည်နယ်သော induction ၏ Holsboer အက်ဖ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2004;28: 424-432 ။ Doi: 10.1097 / 01.ALC.0000117835.49673.CF ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Zis AP, Haskett RF, Ariav Albala အေ, ကာရိုး BJ မော်ဖင်းအကိုက် cortisol ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့်လူ prolactin လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလှုံ့ဆျော။ Psychoneuroendocrinology ။ 1984;9:423–427. doi: 10.1016/0306-4530(84)90050-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Zorick တီ, Mandelkern MA, Lee ကခ, Wong က ML, Miotto K. , Shahbazian ဂျေ, abstinent စိတ်ကြွဆေး-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်လန်ဒန် ED ဓာတ်လှေကားပလာစမာ prolactin ။ နံနက်။ ဂျေမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2011;37: 62-67 ။ Doi: 10.3109 / 00952990.2010.538945 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Zuurman L. , ရွိုင်း C. , Schoemaker RC, Amatsaleh အေ, Guimaeres L. , Pinquier JL, Cohen ကို AF တစ်ဝတ္ထု CBI အဲဒီ receptor ရန် AVE1625 အားဖြင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအပေါ် THC-သွေးဆောင်သက်ရောက်မှု၏ဗန် Gerven JMA တားစီး။ ဂျေ Psychopharmacol ။ 2010;24: 363-371 ။ Doi: 10.1177 / 0269881108096509 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]